Building Bridges through Managing Conflict and Differences - Part 2 by UN-Habitat - issuu
Good Local Governance and Leadership Training
Hab-xukunka Degaan ee Habboon iyo Barnaamijka
Tababarka HoggaamineedDHISKA BIRIISHYADA
U DHEXEEYA MUWADINIINTA IYO DAWLADAHA
HOOSE SI AY SI TAYO BADAN U WADA
SHAQEEYAANTUBTIIPart II Tool KitCONFLICTS AND DIFFERENCESBUILDING BRIDGES THROUGH MANAGINGMAARAYNTA ISKU DHACA IYO IS AFGARANSHAWAAGA.QAYBTA 2aad
QALAB ADEEGEuropean CommissionDSHISKA BiriishyadaWaxa qoray
FRED FISHERWaxana ka qaybqaatay khubaro ka tirsanaa
Asxaabta reer Hungary
Asxaabta reer Slovakia
Asxaabta reer Romania
Asxaabta isbadalka diimoqraddiga ah ee caalamiga ah.
Jaamacadda texas ee ku taal Arlington
Xarunta Qaramada Midoobay ee Dad Dajinta UNCHS (Habitat)
Machadyada tababarka ee dalalka CEE/SEEAsxaabta fadhiga Romania ee horumarinta bulshada (FPDL) ayaa
maamulayay diyaarinta buugan iyaga oo ka helay tageero maal galin ah:
Barnaamijka Gogol Xaadhka Dawladda Hoose (LGE) ee Machadka
Bulshada Madaxa Bannaan.
Xarunta Qaramada Midoobay ee Dad Dajinta (Habitat), Barnaamijkeeda
Tababarka Hoggaanka iyo Maamulka ee ay maal galisay Xukuumada
Netherlands.Qaabaynta Buuga: Paul POPESCU.DSHISKA BiriishyadaTUSMO
Aqoonsi4Hordhac5Fikrado kusaabsan isticmaalka qalabka adeega7Qalabka 1. Is kulaylin/hadal furitaan ah9Qalabka 2. Siyaalaha suurtagalka ah ee wax loo soo bandhigi karo11Qalabka 3. Layli dareen fikradeed ah14Qalabka 4. Waxyaalaha isku dhaca dhaliya iyo istaraatijiyooyinka dhexgalka18Qalabka 5. Uduga bilaabayaasha iyo Tamar Galiyeyaasha21Qalabka 6. Iskudhaca oo macluumaad laga ururiyo25Baadhitaan xaaladeed: Arin xaafadeed27Qalabka 7. Aragti is waydaarsi30Qalabka 8. kaalin ka gorgortanka34Qalabka 9. Istaraatijiyooyinka isku dhac maaraynta39Qalabka 10. Jilista kaalinta goragortanka41Xaalad baadhis: Daryeelka xarunta xanaanada maalinimo ee xaafadda43Qalabka 11. Qiimaynta tusaalayaasha dhexdhexaadinta iyo kuwa kuu gaar ah oo
aad curiso47Qalabka 12. Maaraynta isku dhaca iyo awooda51Qalabka 13. Matalaad khilaaf57Xaalad baadhis: khilaaf ku saabsan ogolaansho dhis59Qalabka 14. Sawirada wada hadalka62Qalabka 15.Barashada farshaxanka fiican ee wada hadalka65Qalabka 16. Qorshaynta sidii waxa la bartay loo fulin lahaa70E r a y b i x i n ( G l o s s a r y)73Xarunta Qaramada Midoobay ee Dad Dajinta (UNCHS)
UNCHS: Sanduuqa Boosta 30030, Nairobi, Kenya
Website: http://www.unchs.org/unchs1/11m/manual.htmDhiska biriishyada oo loo marayo maaraynta isku
dhacyada iyo is afgaransho waaga â&#x20AC;&#x201C; qaybtii 2
fikradaha lagu xusay qoraalka rasmiga ihi
waa tii goraayada mana aha qasab in ay
tahay tii Qaramada Midoobay .July 2005DSHISKA BiriishyadaAQOONSI
Tarjumadda iyo habaynta af Soomaaliga ah ee “dhiska biriishyadaka u dhexeeya
muwaadiniinta iyo dawladaha hoose si ay si wax – ku - ool ah oo wada jir ah u wada
shaqeeyaan iyada oo la adeegsanayo maaraynta isku dhaca iyo is afgaranshawaaga”
waxay ku hirgashay Barnaamajka Is-maamulka Fiican iyo Tababarka Hoggaanka la
soo doortay ee ay maal-gelisay Komishanka Yurub (EU), isla markaana uu fuliyay
Xafiis Goboleedka UN-HABITAT ee Afrika iyo Dalalka Carbeed.
Tarjumadda iyo habaynta af Soomaaliga ah ee buugan, waxa ka hawl-galay Mr.
Maxamad X. Maxamuud oo tarjumadda iyo tifaf-tirka ku xeel dheer. Barnaamijka
Qaramada Midoobay ee Degsiimaha Aadamaha (UN-HABITAT) laanta Hargeysa ku
taal ayaa gacan ka gaysatay hirgelinta hawshan.
Waxa kale oo mahad-naq mudan Jacfar Maxamed Gaaddaweyne oo Akaademiga
Nabadda iyo Horumarka ee Somaliland ka tirsan, Maxamed Muumin oo Jaamicadda
Bariga Afrika ee Puntland ka tirsan iyo Maxamed Afrax oo Xarunta Cilmi-baadhista
iyo Dood-wadaagga ee Koonfurta-Dhexe ee Soomaaliya ka tirsan, kuwaas oo wada
diyaariyay tarjumadda ereyada Ingiriisiga ah ee Tilmaame-barayaashan ku jira.This manual is part of a series that was published by the UN-HABITAT Training and
Capacity Building Branch (TCBB) for ‘capacity building of NGOs and CBOs’ and
‘Building Bridges between local governments and citizens’. As part of the ‘Good Local
Governance and Leadership Training Programme (GLTP)’, these manuals were
translated into Somali and adapted to the Somali context. The GLTP was funded by
the European Commission and implemented by UN-HABITAT under the Regional
Office for Africa and Arab States (ROAAS) between July 2003 and June 2005. More
information on this project can be found at www.unhabitat.org/roaas.4DSHISKA BiriishyadaHORDHAC
Waxa ay buugagan taxana ihi la kulmeen olole caalami ah oo ay qaaday Qaramada
Midoobay Xarunteeda Dad Dajinta (UN-HABITAT) kuna saabsanaa xukunka
magaalooyinka. Mawduucan ah “cid kasta xera galin” oo milicsanaya ololahan
aragtidiisa iyo istaraatajiyadiisa waxa uu si qoto dheer gun dhig ugu yahay
mawduucyada iyo istaraatiijiyada waxbarashada ee ku xusan buugagan. Waxa loo
qorsheeyay buugagan loona qoray in ay u adeegaan baahiyaha horumarinta ururada
aan dawliga ahayn iyo ururada bulshada, hoggankooda iyo shaqaalahooda, waxana
ay fulinta waxbarashadu ku gudbaysaa iyada oo la joogteeyo lana yimaado niyad
dhab ah oo ku dhisan wax wada qabsasho ballaadhan.
Waxa jira caddayn isa soo taraysa iyo aqoonsi kordhaya oo tusaya in ay jiraan
mawaadiic dhawr ah oo qeexaya, qaabaynayana ajandaha xukun magaaleedka ee
qarniga cusub ama kunkan sanadood ee cusub. Arinka u horeeya ee xeragalin ihi
waxa uu ku saabsan yahay in dawladaha hoose iyo bulshooyinka doonaya in ay
noqdaan darafka hoggaaminaya isbadalka bulshada iyo dhaqaaluhu, waa inay qiraan
inay muhiim tahay in ay cid kasta ka qaybgaliyaan, iyaga oo aan eegeyn hantidooda,
Jinsigooda (lab iyo dhadig) da’dooda, haybtooda, marka la gaadhayo go’aan
raadaynaya xaalada noloshooda guud.
Waxa labaad ee in la qiro ay tahay waa hoggaanka la wadaago, oo ah mid dhex
qaadaya xididadii al kumyada jira iyo bulshada. Sida fiicani waa in golayaashaa
hoggaan wadaag ihi, ay ku dhisan yihiin is aaminaad dadka dhexdooda ah, ra’yi is
waydaarsi xor ah oo dhex yaal dhammaan dadka meeshaa wax ku leh iyo istaraatijiyo
ballaadhan oo fikradihii wanaagsanaa iyo aragtidii la wadaagayay loo badalayo ficil
la taaban karo.
Sida lagu qeexay gogol dhiga, taxanahan qalabka fulinta waxbarashadu, wuxuu ahaa
awood ay iska kaashadeen ururka asxaabta Romania ee horumarinta bulshada, iyo
xarunta qaramada midoobay e UNCHS (UN-Habitat) iyo machadka bulshada ee
madaxa bannaan. Waxana qaybta wayn ee maal galinta mashruucan bixiyay
barnaamijka machadka madaxa bannaan ee dhiska dawlada hoose, iyada oo
taageero dhaqaale oo kale ay gaysatay qaramada midoobay-UNCHS (UN-Habitat) iyo
xukuumada Netherlands. Halka ay asxaabata Romania ay ka maamuleen mashruuca,
isaga oo hoos imanayay barnaamijkoodii waxqabad kobcinta ee ku saabsanaa
xukunka iyo hoggaanka bulshada ee bariga iyo badhtamaha qaarada Europe. Waxa
masuuliyadahaa ka mid ahaa in lagu sameeyay tijaabo goobeed buugagii qorshaynta
ka qaybqaadashada iyo maaraynta isku dhaca iyo isafgaransha waaga oo ahaa
barnaamij tababarayaasha lagu tababaray, kuna saabsanaa 18 qof oo
qaybgalayaal ah kuwaas oo ka kala socday 13 dal oo bariga iyo badhtamaha qaarada
Europe ah iyo xubno ka tirsan barwaaqo sooranka dawladaha madaxa bannaan.
Ku dhaqaaqida buugagan tababarka ah waxa uu bilawgoodii ka yimid laba gobol oo
kala duwan oo aduunkan ah. Gudidda hoggaamisa barnaamijka kobcinta waxqabad
goboleedka bariga iyo qaarada Europe oo tilmaamay in maaraynta isku dhaca iyo
qorshaynta ka qaybqaadashadu ay yihiin laba baahiyood oo gobolkoodu tababar
ahaan u baahan yahay, tan oo ay ku soo qaadeen wada tashigoodii 1997. Iyaguna
kooxo kala duwan oo ururo aan dawli ahayn (NGO) iyo ururo bulsho (CBO) iyo madax5DSHISKA Biriishyada
dawlada hoose ah oo ka tirsan dhul ballaadhan oo ah dhulka saxaraha Africa ka
hooseeya ayaa kulmay 1998kii. Iyagaana tilmaamay mawduucyadan, iyo qaar kale oo
uu taxanahani ka hadlay, una arkay in ay yihiin baahiyo tababarkoodu muhiim yahay.
Ugu danbayn, waxa aan rabaa in aan u mahad naqo Fred Fisher oo ahaa muâ&#x20AC;&#x2122;alifkii u
mudnaa qoraayada taxanahan iyo kooxdii kala qaybqaadatay ee heerka sare ahayd,
isagaana (waa Fisher eh) isku xidhayay si loo farsama-diyaariyo qalabkan. Waxana
kooxdaa ka mid ahaa : Ana Vasilache, agaasimihii asxaabta Romania, taasoo ka
maamulaysay geedi socodka hawshan dalka Romania, Kinga Goncz iyo Dusan
Ondrusk, oo ka horana yahay agaasimihii asxaabta Hungary, ka danbana yahay
agaasimihii asxaabta Slovakia, David Tees oo sanado badan ka qaybqaatay buugaag
iyo qoraalo badan oo hayadda UNCHS ay soo saartay, tababarayaashii ka
qaybqaatay tijaabo goobeedka qalabkan iyo kooxdii xirfadlayda ahayd ee hayada
UNCHS ee uu madaxa u haa Tomasz Sudra kuwaas oo khibradoodii wax ku oolka
ahayd galiyay qalabkan si waxa soo baxaya mid saafiya u noqdo.Anna Kajumulo Tibaijuka
Under Secretary General and
xecutive Director (UN-HABITAT)6DSHISKA BiriishyadaFIKRADO KU SAABSAN ISTICMAALKA QALABKAN
Qaybta labaad ee buugani waxa weeye qalab adeeg oo loogu talagalay
tababrayaasha iyo fudaydiyayaasha doonaya in ay qorsheeyaan aqoon is
waydaarsiyo iyo noocyada kale ee khibradaha wax barasho iyaga oo ka duulaya
fikradihii iyo ra’yiya dii ku yimid buugii koobaad. Qalabkani waxa uu cuskanayaa
khibrado waxbarasho oo loo qorsheeyay in ay ka qaybgalayaasha ka caawiyaan sidii
ay u milicsan lahaayeen khibradahoodii iyo aqoontoodii arinkan ku saabsanayd una
xoojin lahaayeen xirf adahooda si ay si tayo badan ugu maare eyaan isku dhaca iyo
khilaafaadka tababarkan ka dib. Qalabkanina qaab muhiim ah oo gaar ah looma
dajin, layskugumana xig-xigsiin si loo dhufto oo loogu tuuro goob aqoon iswaydaarsi
sida shaqo lagu farayaraystay oo la gabagabeeyay oo fulintii uuni hadhay. Markaa
sida qalabyada tababareed ee kale ee taxanahan waxa aanu ku leenahay xor ayaad
u tahay in aad wax ka badasho si ay adiga baahiyaahaaga wax barasho
ujeedeeyinkooda u fuliso iyo waliba baahiyaha dadka wax kaa sugaya ee aad la
Waxa aanu ku soo darnay qalab isku jira oo milicsanaya wixii buugii koowaad ku
xusnaa iyo layliyo loo qorsheeyay in ay taabtaan arimo dhawr ah oo kooxaha
daryeelaya. Qalabkan wax daryeelaya waxa inta badan lagu sheegayaa hadal
furayaashii, bilaabayaashii, tamar galiyayaal. Mararka qaar layliyadan koox daryeelka
ihi waxa ay u ekaanayaan qaar fool xun hadii aad loo isticmaalo ama lagu talaxtago.
Iyada oo ay dhacdo in qalabkan daryeel ama “deegaameed” in mararka qaar lagu
wareero oo la kala saari waayo, waxa loo baahanyahay bal in waxoogaa la
Furfurayaasha iyo bilaabayaasha wax badan ayaa ka dhexeeya waxna waa ay ku
kala duwan yihiin. Furfurayaashu waa qaar aan iyagu mawduuc lahayn, halka
bilaabayaashu sida inta badan lagu sharaxo ay la xidhiidhaan mawduuca lagaga
hadlayo aqoon iswaydaarsiga ama goobta waxbarasho. Furfurayaasha waxa la
isticmaalaa marka aanay xubnaha kooxdu qof qof isu aqoon, waa layliyo loo
isticmaalo in xubnuhu is bartaan oo ay isla jaanqaadaan iyaga oo ah asxaab wa x
Bilaabayaashu, dhinaca kale, waa qalab caawinaya ka qaybqaatayaashu in ay si dhib
yar mawduucii u galaan, waxa ay dhigayaan sallaanka waxbarasho wadaag, waxa a y
ku caawinayaan kooxda, oo uu fudaydiyuhu ku jiro, in ay iska jiraan bilowga xun, si
guudna waxa ay ka caawinayaan ka qaybgalayaashii in ay la qabsadaan qalabka
halkan ku jira ee laga hadli doono. Waxa weeye hordhac howshii dadka ku wacyi
Nooca sedexaad ee layliga ah ee jawiga lagu dhisayo kooxdana lagu daryeelayaa
waxa weeye tamargaliyaha. Waa arin xiiso leh oo kooxda wadar ahaan dareen ku
dhalinaya marka ay ku timaado tamar jabidi.
Waxa aanu helnay in kooxaha
tababarka intooda badani ay leeyihiin ka qaybgalayaal xirfad u leh in ay7DSHISKA Biriishyada
hoggaamiyaan layliyada tababarka ee noocan ah. Markaa ka faaâ&#x20AC;&#x2122;iidayso iyaga.
Dhinaca kale, faraha ha ka qaadin masuuliyada buuxda ee baranaamijka.
Waxana aanu hubnaa in la tababarayaasha qaar ay u yimaadaan barnaamijyada
tababarka si ay uugu tabarucaan qabashada xilalka hadal furfurka, tamarglinta iyo
Waxana weeye kayd weyn hase yeeshee marka aqoon
isweydaarsiyada qaar ay dhammaadaan, ee ka qayb galayaashu ay qaadaan
masuuliyada daryeelka hawlahan, way adagtahay in la tilmaamo qofka meesha ka
Sidaynu hore u sheegnay, qalabkan loogama jeedo in sida loo soo bandhigay loo
isticmaalo.Waxase weeye qalab aad isticmaalayso xiliga aad u baahato hadii
baahiyahaaga uu wax ka tarayo. Waxa kale oo aanu kugu dhiirinaynaa in aad wax ka
badasho, si uu munaasib uuga noqdo looguna isticmaalikaro, baahiyaha wax barasho
ee ka qayb galayaasha.8DSHISKA BiriishyadaQALABKA 1
ISKULAYLIN/HADAL FURITAAN AH
SafarSaw irka khariidadii goobta isku dhac maaraynta
Lataliye safar: layligani waxa uu leeyahay awood ka shishaysa waxa lagu soo jeediyay
geedi socodka soo socda. Tusaale ahaan, waxa aad ku noqon kartaa weedhihii ay ka
qayb galayaashu curiyeen e isku dhaca ku saabsanaa oo aad ku xidhi kartaa
darajooyinkii isku dhaca e uu sheegay Moore (eeg qalabka 4).
Waxa aad ka qaybgalayaasha waydiinkartaa in ay arimaha u dhigaan heerarka isku
dhacyada, sida mid dadka dhexyaal, mid urureed, mid xuduudeed ama ku laabo
kaadhadhka qoraaladaada marka aqoon iswaydaarsigu dhamaado, waxaana aad
waydiisaa ka qaybgalayaasha in ay ku daraan wax yaabahan kaadhadhkooda amaba
badalaan. Waxa aanu hubnaa in adiga iyo ka qaybgalayaashu aad haysaan fikrado
badan oo kale oo lagula soo baxayo macdan qaali ah marka lagu jiro aqoon
iswaydaarsiga, hadaba kaadhadhku yaanay kaa fogaan.Ujeedada waxbarashadaLayligan waxa looga jeedaa in uu ka qaybgalayaasha siiyo fursad ay isku bartaan
kuna bilaabaan baadhitaanka fikradaha iyo rayiyada la xidhiidha isku dhac
maaraynta.Waqtiga la raboWaa ilaa 60 daqiiqo: hadii uu ka dheeraado waxa ay u egtahay in ka qaybgalayaashu
ay la yimaadeen khariidado fiican oo goobta aqoon iswaydaarsigu ka hadlayo ku
Xiligaaga iyo wixii ku soo jiitaba dib u habayn sidan waafaqsan ku samee.Geedi socod
1. U sharax layliga si ay ka qaybgalayaashu qof qof isu bartaan oo ay u
muujiyaan dareenkooda iyo khibradooda ku saabsan isku dhaca. Sii ka
qaybgalayaasha 4 ilaa 6 kaadhadhka tusmada ah oo waawayn, waxana aad
waydiisaa in ay magacyadooda kaadhadhka mid ka mid ah ku qoraan.
Way fiicnaanlahayd hadii kaadhkaasi midab ka duwan kuwa kale uu leeyahay.
Kaadhadhka soo hadhay waxa aad ka doontaa in ay ku qoraan eray ama
weedh ama sawir ama calaamad tuseysa sida qof ahaan ay isku
dhaca(kaadhkasta ku yaal) u dareemayaan. Si aad u hubiso in shaqadani
caddaatay, waxa aanu kuu soo jeedinaynaa in suâ&#x20AC;&#x2122;aashan soo socota aad far
waawayn sabuurada ama waraaqahan waawayn e la rogrogo uugu qorto:9DSHISKA BiriishyadaMa
Ma r k a a a d k a f i k i r t o “ i s k u d h a c ” w a a m a x a y f i k r a d a h a , d a r e e m a d a ,
saw ir ada i sl a m ar kaa m aska xdaada h or yi m aa daa?
2.Marka ay ka qaybgalayaashu fikradahooda ku qoraan kaadhka tusmada,
waydii, qof kasta mar, in uu is sheego oo uu tilmaamo waxa kaadhadhkiisa ku
qoran. Xiligan waxa aad waydiinaysaa oo kaliya su’aalo aad wax caddayn ku
codsanayso waxa aad ka codsataa in ay kaadhadhkooda ku dhajiyaan
gidaarka iyaga oo kaadhka magacoodu ku qoranyahay xaga sare marinaya,
kaadhadhka kalana hoosta marinaya.3.Waxa aad waydiisaa kooxda wax dareen guud ah oo fikradaha iyo sawirada la
soo dha-dhajiyay ku saabsan.4.U qaybi kooxda sadex ama afar kooxood oo yaryar, oo kooxdiiba aanay ka
badnayn lix ka qaybgale, waxaana aad ka codsataa in ay waraaqo caadi ah
ku sawiraan khariiradii fikradooda iyaga oo tusaya waxa ay kaqabaan
fikradaha la soo bandhigay.waxa laga yaabaa in aad u baahato xasuusinta
khariirada fikradaha maxaa yeelay in lagu weeydiiyo ayay u dhawdahay, waxa
weeye khariiradaasi hab loo ururiyay fi kradihii, xogtii, macloomaadkii iyo
wararkii yaryaraa e kale e fikrada ku saabsanaa si ay u bixiso qaab shaqo oo
looga fikiri karo arin gaar ah sida maaraynta isku dhaca5.Kooxihii ururi oo nidaami oo waa in ay khariiradihii fikradahooda gidaarka ah
ku soo bandhigaan.6. Marka ka qaybgalayaashii ay shaqadan dhammeeyaan, waxa aad ku dhiirisaadood layligii iyo macnihiisii ku saabsan si ay aad ugu gartaan xaalada iyo
natiijooyinka isku dhaca, ka fikir in aad isticmaasho su’aalahan soo socda
qaar si aad doodii hore uugu mariso.o
oMiyaad sawirdan iyo erayadan qaar kamid ah la yaabtay? Maxaa kuugu
Halkee ayay isaga egyihiin ama ku kala duwan yihiin sida ka
qaybgalayaashu ay u arkaan ama u sharaxeen isku dhaca.
Sidee ayaad tababare ahaan ama dhexdhexaadiye ahaan u isticmaali
kartaa layliga noocan ah si loo caawiyo dadka isku dhacu haysto si ay
ugu gudbaan xal nabadeed?Haka baqin in aad dib u habayn ku samayso layligan si aad uuga fuudh yeesho
baahiyaha kooxda aad la shaqaynayso.
Waxaa loo qorsheeyay in wax laga badalo ama dib u qaabayn lagu sameeyo (layliga)
isla goobtaa dhexdeeda marka fikrado iyo aragtiyo ay muuqdaan.10DSHISKA BiriishyadaQALABKA 2:
SIYAALAHA SUURT AGALKA AH EE
WAX LOO SOO BANDHIGI KARO
Fikrado aan arin xanbaarsanayan w aa madhni
Male aan fikrado ka dambaynina
Iyada oo khudbadaha qaar badani aanay la jaanqaadayn mabadiida waxbarashada
khibrada ku dhisan, waxa aanu kuu soo jeedinaynaa in aad halkoodii ku isticmaasho
wadahadal laba dhinac ah ama dood lahagayo si loo soo bandhigo xog arinkan la
xidhiidha ama fikrad ku saabsan marxalada labaad ee fulinta waxbarashada kooxda.
Murtidan soo socota waxa loo qorsheeyay in ay kaa caawiso diyaarinta, soo
bandhigida fikrado cusub, ra’ayiyo, macluumaad, xog ama qalab arinkaa laxidhiidha.
Magaca maw duuca doodaada la haga yo:…………………………………………………………………………………………………
Qodobada muhiimka ah ee aad doona yso in aad sheegto:
(sadex ama afar ayaa laga yaabaa in ay ku filan tahay, hadii aad rabto in ka
qaybgalayaashu ay xusuustaan )…………………………………………………………………………………………………
Tusaala ya asha nolosha ee dhabta ah ee aad rab to in aad isticmaasho si aad
qodobadaada u cadda yso:………………………………………………………………………………………….……
Su’aalo la w aydiinaayo dhaga ysta yaasha ada:
Waxa kuw an loo qorshee ya y in a y xasuustaan tilmaamahooda ku saabsan
qodobada aad sheega yso khibr ada a y u l ee yihiin?………………………………………………………………………………………….……
Qodobadaadii uugu muhiimsanaa oo la soo ururiyay ama u sheegid (dadka) wixii aad
hore uugu sheegtay.
U sharax sida aad u qorsh a ysata y i n aad u isticmaasho muuqaalo (w ax la
daaw ado) xoojina ya bandhigaaga:………………………………………………………………………………………….……
……………12DSHISKA BiriishyadaLa taliye
SafarLat al i ye s af ar oo kal e : socdaalkan ba adhit aank a ihi wa xa uu noqon m id ku
soo jiita inta aadan sii fogaan, waxa aanu kuu soo jeedinaynaa in aad dib u
eegto qalabkii adeeg ee aynu ku hoos ururinay (calaamada) qalabka 5.
Hadal furfurayaasha, bilaabayaasha iyo tamargaliyayaashaasi waxa weeye
wax yar oo ka mid ah wax yaala badan oo aad u baahantahay in aqoon
iswaydaarsiga aad ku isticmaasho inta uu socdo.
Waliba waxa aanu xiligan kugu dhiirinaynaa in aad ka fikirto sida aad u
qaadan karto taxanaha qalabka si aad ugu qorshayso aqoon iswaydaarsi mid
ka mid ah kooxaha macmiilkaaga ah.
Qalabka adeeg ee aad ugu danbaynta goosanayso in aad isticmaasho waxa
uu ku xidhanyahay dadka aad rabto in ay ku dhagaysataan, iyo
baahiyahooda waxbarasho iyo awoodaada aad ku bixin karto tababarka adoo
eegaya baahiyaha ay ka fikirayaan. Ha u laba lugoodin in aad qaadato oo
aad doorato waxa aad isleedahay qalabka buugan wuu ka shaqayn karaa,
waxna ka badal si uu uugu habboonaado baahiyaha waxbarasho ee
macaamiishaada, meelaha dhiman ku buuxi qalabyo adeeg oo aad keyd kale
ka soo qaadatay, waxaana ka sii wada mihiimsan in aad adigu qaar curiso.13DSHISKA BiriishyadaQALABKA 3:
LAYLI DAREEN FIKRADEED AH
Cutubka labaad ee fahamka dabiicada isku dhaca waxa ku jira dood ku saabsan
kaalinta dareenku ka qaato dhiirinta iyo hurinta khilaafaadka iyo isku dhacyada.
Dareemadu inta badan waxa weeye caddayn korka sare ah oo tusaysa waxa eexasho
iyo cid jeclaysi ama nacayb hoosta jiifa. Layligan yar waxa loo qorsheeyay in uu ku
caawiyo ka qaybgalayaasha in ay gartaan in sida ay wax u dareemayaan (ama u
arkaan) ay ka duwanaan karto sida dadka kale wax u arkaan. Waxa kale oo uu
sawirayaa in xaaladaha qaar aanay jirin jawaabo ama sax ah ama khalad ahi, ee ay
yihiin uun qaar kala duwan oo ku dhisan sida cid kastaa wax u aragto.
Layliyada labajibaaranayaashani waxa ay noqon karaan is kulaylin horseed u ah
dood qoto dheer oo ku saabsan fikradaha ka jira ka qaygalaha ururkiisa ama
bulshadiisa, taas oo keeni karta khilaafaad aad u khatar ah ama isku dhac hadii a a n
la muujin oo aan laga hadlin. Noqo wax curiye marka aad isticmaalayso layligan
fudud si aad gunta ugu dhaadhacdo.Ujeedada w axbarashada: In aad qaadato aragtida ah in ay jirto siyaalo aan mid
kaliya ahayn oo loo eegi karo mushkilad ama fursad.Xiliga la rabo: 20 – 30 daqiiqo, ama in ka badan hadii aad u qaadato xagamarxalada labaad.Kaydka loo baahanyahay: waxba.
Geedi socodka: Marxalada 1
1.Ku sawir suurada soo socota waraaqaha balballaadhan ee la rogrogo ( ama
sabuurad ) far qofkasta oo kooxda ka mid ahi uu si cad u arki karo. Qof kasta
sii warqad yar oo cad. Adiga oo aan wax hordhac ah ama sharax ah samayn
waydii ka qaybgalayaasha in ay eegaan sawirka oo ay ku qoraan warqada yar
jawaabta su’aashan: imisa labajibaarane ayaad meesha ku aragtaa?2.Waxa aad siisaa
jawaabahooda.kaqaybgalayaasha30ilbidhiqsisiayuqoraan14DSHISKA BiriishyadaFiirada tababaraha:
Sawirada ku xusan gabagabada hawshan ayaa tusaya sida loo soo saarayo
tirada labajiraanayaasha e ka qaybgalyaashu ay ku qoridoonaan
jawaabahooda. Waxaa caadi ahaan tiradu noqondoontaa 16 ilaa 30.3. Ururi jawaabaha kana qaado tirooyinka ku xusan jawaabtooda adoo ku qoraya
waraaqaha balballaadhan naftooda, tirooyin kuna dadka ha u muuqdaan.
4. Marka dhammaan jawaabahoodii la qoro, waxa aad waydiisaa ka
qaybgalayaasha ta ay u arakayaan in ay tahay jawaabta saxda ah. Jawaabta
su’aashani waxa ay inta badan ku xidhan tahay tirada ugu badan ee
labajibaarane ee qofku sheegay. Qaar ayaa laga yaabaa in ay yidhaahdaan
jawaabaha oo dhammi waa sax, maxaa yeelay su’aasha ayaa ahayd inta
labajibaarane ee aad aragto sheeg ee may ahayn imisa labajibaarane ayaa
meeshaa ku jira. Tani waa jawaabta aad rajaynayso, maxaa yeelay waxa ay
tilmaamaysaa arinka meeshaa ku jira oo ah waxa qof kasta u sax ah waxa uu
markaa meesha ku arko. Dareenkeena fikradeed waa dhabtaa aynu aragno,
taa ayaana aynu sheegnaa inta badan, kulana xidhiidhnaa dadka kale.
5. Bal waxa aad waydiisaa ka qaybgalayaasha waxa ay dareemeen marka qof uu
sheegto in uu arkay labjibaaranayaal ka badan inta ay arkeen, Tusaale ahaan:
in uu yidhaa waan ka shakiyay, waxa aan dareemay in aan gaabiyay, way isoo
jiidatay oo in aan ogaadaan doonay. Waxa aad waydiisaa waxa ay sameeyeen
marka ay xaqiiqsadeen in qof kale uu arkay labajibaaranayaal kuwooda ka
badan, Tusaale: in ay yidhaahdaan dib ayaanu u eegnay bal in aanu eegno
wixii aanu markii ugu horraysay seegnay; waxa aanu isku daynay in aanu
eegno khaladka layliga ama macalinka oo si xun noogu bandhigay (tusay).
6. Waxa aad ku dhiirisaa in dood layliga laga sameeyo, adoo ka qaybgalayaasha
waydiinaya waxa ay rayiyada kala duwan ee tirada labajibaaranayaasha ee ku
qoran warqadaha balballaadhani tusayaan ee ah sida dadku ay u kala arki
karaan arimaha xaaladaha isku dhaca.
Marxalada II: hoos u sii dhaadhac
Inaka oo ka duulayna dooda layligii labajibaaranayaasha, waxa aynu filaynaa in ka
qaybgalayaasha laga yaabo in ay diyaar u yihiin in ay eegaan arin bulshada
gudaheeda ah ama ururkooda ku saabsan oo lagu kala duwanyahay xaga fikirka oo
laga yaabo in mustaqbalka aad loogu sii kala fogaado ama layskuba dhaco hadii aan
xiliyadan dhaw la eegin. Tusaale ahaan, waxa dhici kara in ay tahay curinta nidaam
shaqaalaha wax qabadkooda lagu qiimeeyo oo lagu isticmaalidoono si loo dalacsiiyo
ama mush aharka loogu kordhiyo, ama cashuur iibka ah oo dheeraad ah oo la saarayo
dhammaan badeecadaha iyo adeegyada ururada aan dawliga ahayn iyo ururada
bulshada, ama fikrada muwaadiniintu ka qabto qoysaskii reer miyiga oo ku soo15DSHISKA Biriishyada
qulqulaya magaaladii. Fikradaha xaaladahaa laga qabaa waxa ay dhakhso isu sii rogi
karaan qaar qoto dheeraada oo wajiyo badan loo dhigo.
Iyada oo la eegayo xaalad dhab ah oo hor taagan goobta shaqada ama bulshada ay
ka qaybgalayaasha aqoon iswaydaarsigu ka soo jeedaan, waxa aad layli fikradeedka
marxalada 1aad raacisaa hawlahan soo socda. Waxa aynu suurayn karnaa in
marxaladani ay qaadanayso dhawr saacadood iyada oo la eegayo kolba arinka laga
hadlayaa sida uu yahay. Bal adigu qiyaas inta waqti loo baahankaro.
1.Bal dhammaan kooxdu ha soo jeediyaan arin ama arimo ka jira ururadooda
ama bulshooyinkooda, kaas oo caadi ah oo ay fahansanyihiin badi ka
qaybgalayaashu. Ku soo ururi liiska aad hesho mid ama laba arimood haday
suurtagal tahay. Hawshani waxa ay dhib yaraanaysaa hadii kooxda la ururiyo
si arin gaar ah ay uuga hadlaan.2.Samee kooxo hawleed yaryar, haku qoraan waraaq caadi ah fikradaha kala
duwan ee ama ay ka qabaan iyagu xaaladaa (arinkaa ), ama ka maqleen
dadka kale ama siyaabo kale ku ogaadeen, sida jaraaâ&#x20AC;&#x2122;idka dalka oo ay ka
Bal koox kastaa fikradaha ha u kala hor mariso sida ay ukala daran yihiin waa
xaga suurta galka in isku dhac ay hurin karto, ama ha siiyaan mid kasta darajo
kul ah, iyada oo kolba marka kulku kor u kaco ay kordhayso fursada huritaanka
holac lama filaan ah.
Hadii kooxuhu ay arin isku mid ah ku wada hawlanyihiin, kooxuhu dib ha u
kulmaan hana qoraan liisaskooda si laysku ag dhigo.3.4.
5.Dib u kulansii kooxo hawleedkii hala eego waxa la qaban karo, iyo badalaada
fikradaha jira si hoos loogu dhigo suurtagalka khilaaf ballaadhan oo dhaca oo
arinkan ku saabsan, ama in la yareeyo suurtagalka isku dhac mustaqbalka ah.6.Qor qorshe hawleedyadii kana dooda.16DSHISKA BiriishyadaWaxa hoos aad ku arki shax sharaxaysa inta labajibaarane ee suurtogal
ah ee ka qaybgalayaashu ka fikiri karaan layligan. Tira kasta oo ka yar lix
iyo toban ama ka badan sodon waxa ay mudantahay in loo arko jawaab
wax abuurid leh.
3017DSHISKA BiriishyadaQALABKA 4
WAXYAALAHA ISKU DHACA DHALIYA IYO
Ujeedoo yi nka w axbarashada: si loo helo aqoontii iyo xirfadih ii lagu tilmaami lahaa
sababaha isku dhaca iyo suurtagalka siyaalaha dhexgalka.
Waqtiga la rabo: 75 ilaa 90 daqiiqadood.
Ka ydka la rabo: war aaqo la socda layligan iyo wara aqihii caadiga ahaa, qalin wax
lagu calaamadiyo, xabag, lana doorbidaayo in ay tahay nooc aan gidaarka goobta
wax yeelo soo gaadhsiinayn.Geedi socodka:
B)Soo bandhig layliga adoo waxoogaa faahfaahin ah ka bixinaya baahida loo
qabo in la tilmaami karo sababaha keena isku dhaca iyo khilaafaadka
dhexmara dadka, ururada, bulshooyinka, umadaha IWM. Si qofku u noqdo
maareeye isku dhac oo tayo leh waxa uu u baahanyahay khariirad fikradeed
cad oo ku saabsan waxa dhaliya isku dhacyada iyo khilaafaadka. Layligana
waxa loo qorsheeyay in uu ka caawiyo ka qaybgalayaasha aqoon
iswaydaarsiga sidii ay uugu qaybinlahaayeen isku dhacyada iyo khilaafaadka
darajooyin tusaaya sababohooda kala duduwan. Waxa aad isticmaali
khariirad fikradeed sababaha isku dhaca ku saabsan oo uu diyaariyay
Christopher Moore (geedi socodka dhexdhexaadinta, P.27). Waxa uu
tilmaamayaa shan darajo oo waawayn oo sababaha isku dhaca ah :
macluumaad, dan, qaab, wax la qiimeeyo, iyo xidhiidh. Waxa laga yaabaa in
aad u baahato tusaale bixin mid kasta ku saabsan, hasa wada bixin
kaydkaaga fikradaha fiican ah. Hawshaa ka qaybgalayaasha ayaa laga rabaa
U qaybi ka qaybgalayaasha shan koox hawleed oo yaryar adoo isticmaalaya
hab malayn ah oo aadan hore u isticmaalin, sida adoo u qaybiya si aan waxba
loo kala eegin waraaqo yaryar oo uu xarafka ugu horeeya ee sabab kasta oo
(isku dhackeenta) darajadeedu ku taal. Tani waxa ay rabtaa in waraaqaha
laga dhigo tiro siman, waa iyada oo tirada guud ee dadka shan loo qaybiyo.
Waxa aad fartaa koox walba in ay haystaan sodon daqiiqo si ay u sameeyaan
Noocyada isku dhacyada ee ku jira darajooyinka sababaha ee loo qaybiyay
(loo xilsaaray ), sida: isku dhac macluumaad ku saabsan, waxa dhalin kara
war khaldan oo qofka (cidda) lasiiyo, iyo
Sida suurtogalka ah ee loo gudo gali karo ka hadalka wixii gaar ah ee
dhaliyay isku dhaca.18DSHISKA Biriishyada
4.Dib u shiri kooxihii waxaana aad waydiisaa in ay qoraan liiska sababaha
darajooyinkii isku dhaca ee loo xilsaaray iyo sida ay soo jeedinayaan in
midkasta loo gudogalo.5.Waxa aad waydiisaa ka qaybgalayaasha in ay bixiyaan tusaalayaal ku saabsan
khibradahooda gaarka ah ee isku dhacyo ama khilaafaad ay soo mareen iyo
istaraatiijiyooyinka gudo galka ee ay isticmaaleen si xaaladii ay u maareeyaan.
Ku qor tusaalayaasha waraaqo gooni ah oo caadi ah, adoo racaya shantii
darajo ee Moore.6.Bixi khariiradii Moore ee isku dhaca si aad abaalgud uuga dhigto shaqada iican.
Waa la sawiri karaa. Boga soo socda ayaa laga heli karaa.19DSHISKA BiriishyadaW i xi i dhal i na ya y i s ku dhaca,Kala dooradka lagu dhex gali karoIsku dhacyada macluumaadka
♦ Xog la’aan
♦ Xog khaldan
♦ Aragtiyo kala duwan oo waxa macluumaadku
la xidhiidho ah.
♦ Siyaala kala duwan oo loo micnaystay xogta
♦ In laga heshiiyo macluumaadka muhiimka ihi kuwa
♦ Diyaarinta qaab dhex ah oo lagu qiimeeyo
♦ In khabiir dhinac saddexaad ah la isticmaalo si loo
helo ra’yi dibadeed am si ismari waaga loo
Dhexgalka arimaha danaha:
♦ Danaha oo diirada la saaro, ma aha mawaaqifta.
♦ In la eego asaas dhex ah oo dhinacna jirin.
♦ In la diyaariyo xalal waafaqaya baahiyaha
dhinacyada oo dhan.
♦ Ballaadhi kala dooradka iyo kaydka
♦ Diyaari isbarbardhig si aad u fuliso danaha
culayskoodu kala duduwanyahay.
Dhexgal qaab dhismeedka ah:
♦ Si cad u qeex ama u badal kaalmaha.
♦ Badal dhaqamada wax duminaya.
♦ Dib u meelayn ku samee lahaanshihii ama gacan ku
♦ Samee geedi socod go’an qaadasha ah oo la isla
♦ U wareeg wax is dhaafsi aan mawaaqif ahayn ee
♦ Badal xidhiidhka dhinacyada ee dabiiciga ah ama
♦ Hagaaji cidhiidhiga dibada ee dhinacyada haysta.
♦ Badal cidhiidhiga xaga wakhtiga ah.
D h e xg a l k a l a x i d h i i d h a w ax l a q i i m e e yo :
♦ (Fiiri) in mushkiladii aad sharaxeeda uula kacdo
♦ U ogolow dhinacyadii in ay waxna isku waafaqaan
waxna isku diidaan.
♦ Abuur goobo saamayneed meesha uu dhaqan
kaliyihii ka taliyo.
♦ Raadi ujeedooyinka waaweyn oo dadku wadaago.
Dhexgal xidhiidhka ku saabsan:
♦ Xakamee erayada caadifada adoo raacaya qaab
iyo xeer iyo isu imaatin, iwm.
♦ Horumari sidii loo sheegan lahaa dareenka adoo
sharci ka dhigaya oo dajinaya geedi socodkii.
♦ Caddee dareenada waxaana aad samaysaa
♦ Horumari nooca iyo tayada xidhiidhka
♦ Jooji dhaqanka aan fiicnayn ee soo noqnoqda adoo
♦ Dhiiri dhaqanada fiican ee mushkilada lagu
xalinayo.Isku dhac daneed:
♦ Tartan dareen ama dhab ah oo ka dhashay:
♦ Dana jira
♦ Dana hab ahaaneed
♦ Dano nafsiyeedIsku dhac qaab dhismeedka ah:
♦ Dhaqamo ama dhexgal wax dumis ah
♦ Khayraadka oo aan gacan ku hayntooda,
lahaantooda ama qaybintooda loo sinnayn.
♦ Awoodii iyo suldaddii oo aan loo sinayn
♦ Arimo juqraafi, dabiici ah am deegaan oo
hortaagan wax wada qabsigii.
♦ Cidhiidhi wakhtiI s k u d h a c w ax l a q i i m e e yo :
♦ Waxa jira qiyaaso kala duwan oo lagu
qiimeeyo fikradaha am dhaqamada.
♦ Ujeedooyin gaar ah oo leh waxyaalo la
qiimeeyo oo gaar ah.
♦ Kala duwani xag nololeed, fikradeed ama
Isku dhacyada xidhiidhka:
♦ Caadifad xoog leh
♦ Fikrad qaldan ama qofka ku qufulan
♦ Xidhiidhka oo liita ama aan jirin
♦ Dhaqan khaldan oo soo noqnoqda.DSHISKA BiriishyadaKhariirada sababaha isku dhaca iyo siyaalaha suurtogalka h ee loo guda galayo:
Waxa laga soo dheegtay geedi socodkii dhexdhexaadinta ee Christopher Moore (boga 27)QALABKA 5:
UDUGA BILAABAYAASHA IYO
Halkan waxa aad ku arki qaar ka mid ah bilaabayaasha iyo tamargaliyeyaasha,
iyo malaha hadal furfurayaasha, kuwaas oo maaweelo kuu noqon doona fiirana
kaaga baahan. Waxa laga soo dheegay inta badan khibradii laga helay
shaqadii badhtamaha iyo bariga Europe, halkaa oo tijaabo goobeed laga
sameeyay, iyo tababaradii aqoon iswaydaarsiga tababarayaasha ee la
xidhiidhsanaa buugaagtan iyo qaar kale. Waxana loo qorsheeyay in ay
ceeryaamada tababarayaasha yareeyaan, iyaga oo si aan dhibaato lahayn
uuga jeedinaya wixii mushkilad soo gaadhay kooxda maalintaa. Loomana liis
garayn si gaar ah ama sida ay u kala muhiimsan yihiin ama caqligalsan yihiin.
A) Bilaabe : kan waxa loo isticmaali karaa in lagu muujiyo siyaalaha labada
dhinacba u guulaysanayaan ama muujinta noocyada kala duwan ee isku dhac
maaraynta, iyada oo laga xiganayo shantii qaab hawleed ee Kenneth Thomas
ee ku xusnaa qaybtii koowaad ee buugan.
Kaydka loo bahanyahay: hal qalin, hal waraaqa oo ah nooca (A-4) oo la siiyo
labadii qof ee koox ahba. Una diyaari waraaqo yaryar qof kasta. Nus ku qor
erayga “Maroodi” nuska kalana erayga “Guri”.
Geedi socodka: ka qaybgalayaashu ha yeesheen kooxo laba laba qof ah.
Koox kasta sii qalin kaliya iyo waraaq (A-4) ah oo kaliya. Mid kooxda ka mid
ahna waraaqdii yareyd ee “Maroodigu” ku qornaa sii, ka kalana tii erayga
Waxa aad fartaa in labada sawirba ay waraaqda (A-4)ta ku sawiraan, iyada oo
ay sidan samaynayaan: qofna yaanu tusin una sheegin, qofka kale waxa lagu
yidhi sawir. Labaduba waa in ay qalinkaa markasta haystan. Waa in ayna afka
ka wada hadal. Waa in ayna qalinka warqada kor uuga qaadan waxana la
siinayaa shan daqiiqo si ay labadii sawir u sawiraan. Tilmaamahan waraaq
caadi ah ayaa dhammaan loogu qori karaa si ay u arkaan.
Marka ay shanta daqiiqo dhammaadaan, jooji hawsha, koox kastana wixii ay
qabatay war bixin haka keento, iyo sida ay u wada shaqeeyeen. Bal ha21DSHISKA Biriishyadawadaagaan sawirkoodii si loo eego loogana hadlo fikrada isku dhaca ee labada
dhinacba guulaysanayaan, ama dhinac guulaysanayo dhinacna khasaarayo,
ama istaraatiijiyadii Thomas ee wax wada qabashada ahayd, iyo tartankii iyo
istaratiijiyooyinkii kale ee ku haboonaa halkan.
B) Tam ar gal i ye: la yliga ni wa xa uu u b aahanya h ay nooc kubad ah. Hadi i aan ad
hayn kubad ama kubado badan oo hareerahaaga (wareegaaga) tababare
ahaan lagu tartamayo, waa in aad carartaa oo aad qaar soo iibisaa. Maxaa
yeelay waa qalab aad loogu baahanyahay, gaar ahaan marka waxbarashadan
oo kale la qabanayo.
Geedi socodkii: waa mid fudud. waydii ka qaybagalyaasha in ay goobo
sameeyaan oo kubada qof loo tuuro, waxa la odhanayaa qofkaa sheeg fikrad
ama wax muhiim ah oo maanta la bartay, ama wiigan, wax uun sheeg,
qofkaasina kubada mid kale ayuu u tuurayaa sidaas ayaanay ku soconaysaa
ilaa dhammaan ka qaybgalayaashii ay fursad u helaan in ay macluumaadka
wax ku daraan (qofba wax sheegayo). Layligan fududi waxa uu leeyahay
shaqooyin aan tiro lahayn oo aad geedi socodka ku biirin karto, isticmaal
malahaaga iyo khibrada kooxda si kubadaa hawsheedu u socoto.
C) Kani waxa uu noqon karaa bilaabaha fiican ee maalinta labaad, ama mid
tamargaliya ah marka kooxda tamarteedu ay halka u hoosaysa gaadho. Samee
goob cid kasta koobtay ka qaybgala kastaa isku dhaca ayuu wax ka
tilmaamayaa hadal laâ&#x20AC;&#x2122;aan waxaana aad fishaa in dadkaasi qaarkood oo
bulshaawiyiin ihi ay bixiyaan jawaabo dhawr ah.
D) Bilawga tamargalinta kubadaha badan: waxa aad halkan ku arki layli la
xidhiidha geedi socodka dhexdhaxaadinta ama gorgortanka kaas oo la
tacaalaya dhinacya badan. Waxa aad heli sawirka marka aad sii akhrido sid a
geedi socodku u muuqanayo.
Kaydka loo baahanyahay: Kubada badan, biibiile la buuxiyo, sharaabaad o
gaboobay oo waxyaabaha hadh hadha laga buuxiyay, ama wax uun lagu guray.
Geedi socodka : Mar labaad samee goobo koobaysa ka qaybgalayaasha
jooga dhammaan. Hawl fudaydiyihii ayaa kooxda u sheegaya in kubada ama
wax la mid ah loo tuuro sida dadku iskugu xigxigaan markasta, si loo cadeeyo
halkan, qofku waxa uu kubada ka helayaa qof kaliya markasta, waxa uu isna
kubada u gudbinayaa isla qofkii uu kubada markii ugu danbeysay u gudbiyay.
Gudbinta kubada u horaysaa way soconaysaa ilaa qofkasta oo goobadaa
(wareega) ku jira ay soo gaadho, markaa ayuu hawl fududeeyihii keenayaa
kubada badan oo geedi socodka ku saabsan, marka hore si aayar ah, marka
danbana si dagdag ah, dhab ahaan geedi socodku marka dambe wuu22DSHISKA Biriishyadaburburayaa, wax qiima leh ayaana dhaca oo tusaya waxa ka iman kara
gorgortanka ama dhexdhaxaadinta dhinacyada badan.
Halkan eegmadii qofku waxa ay ku soo ururaysaa qofka uu kubada ka
qaadanaayo iyo ka uu u tuuraayo. Waxa dhacaysa in dhammaan dadkii kale oo
aanu markan ku xidhnayn uu Iloobo waxa ku jira war is waydaarsi dhacaya oo
in yar uuni dareemi karto. Kooxda tayadeeduna geedi socodkan xad ayay
leedahay. Halkaa ayaa qof fudaydiye ihi uu ku soo dhextuurayaa sharaabaa d
gaboobay ama biibiile labuuxiyay markaa ayuu dhaqdhaqaaqii is badalayaa. Ka
qaybgalayaasha qaar ayay dhib ku noqonaysaa in ay maareeyaan is badalka.
Waad heshay sawirkii. Waa layli tusi kara dhaqan badan oo qofka soo mari
kara marka uu ku jiro gorgortan ama dhexdhexaadin dhinacyo badan ah.
E. Hadal furfuraha dadka arinka bilaabaya: layligan waxa loo qorsheeyay i n
uu caawiyo kooxda si ay isu bartaan bilawga aqoon is waydaarsiga.
Kaydka loo baahanyahay: waxa kaliya ee loo baahanyahay waxa weeye ka
qaybgalayaasha oo hela dhul balaadhan oo furan.
Geedi socodkii : tababarihii wax sahlayay ayaa waydiinaya ka
qaybgalayaasha in ay kooxo ugu ururaan meelo kala duwan oo qolka ah iyaga
oo cuskanaya sidan: meelaha ay ka kala yimaadeen dhul ahaan (waxa aad
sawirtaa in dhulka qolku yahay khariirad balaadhan oo gobolka ama dalka ah),
ama meelaha ay ka shaqeeyaan (waxa dhici karta in la siiyo goobo kala
duduwan ururada kala jaadjaadka ah ), ama khibradooda dhexdhexaadinta,
tababarka, ama si uun, iyo xogkasta oo aad dareemayso In ay arinta la
xidhiidho ama wax soo jiidan karto ama labada arinba laga helikaro.
Marka dhawr wareeg oo arinkani dhaco, waxa aad waydiisaa kooxaha yaryar
ee uugu danba ururay in ay waxooga iska weeydiiyaan waxa ay ka filayaay n
barnaamijkan iyo in ay u diyaargaroobaan in ay u gudbiyaan wixii ay gaadheen
Soo koob natiijadii guud ee layliga si arinkan loo xidho:
F) Qof kale oo bilaabaya fikradaha dhinac kastaa uu guulaysanayo, ama
dhinacna guulaysanayo dhinacna khasaarayo?
Kaydka loo baahanyahay: nacnac badan.
Geedi socodka: waxa aad ka qaybgalayaasha ka codsataa in ay sameeyaan
kooxo laba laba qof ka kooban. Waxa aad u sheegtaa in ay galayaan shaqo
kooxeed halkaa oo qof kastaa gaar ahaantii laga abaalindoono shaqada fiican
ee uu qabto, shaqada fiican waxa lagu micneeyay waa in ay iyagu ku
guulaystaan in suulkoodu dusha maro, marka uu dhaco tartan ciyaareed suulka23DSHISKA Biriishyadadusha la marinayo, waxa aad koox kasta u sheegtaa in ay gacmaha u
qabsadaan si ay labadooda suul dusha u maraan oo diyaar u noqdaan in
suulalka qofka kale kuwoodu ka sareeyaan. Tilmaan kale oo aad muhiim u ahi
waxa weeye: ma wada hadli karaan labada qof! Waxa aad siisaa (15) ilbidhiqsi
si tartanka ay u dhammeeyaan.
Jooji tartankii suulka, oo xaga qolka u dhaqaaq waydii inta qof kastaa uu
suulkiisii dusha kamaray kii saaxiibkii, markaa ku abaali qofka nacnicii badnaa.
Malaha shaglaydhka “Belgian” abaal gud kaagu noqon maayo! Kooxaha qaar
ayaa markiiba aqoon sanaaya faa’iidooyinka wax wada qabsiga si labadooduba
ay u guulaystaan. Qaar ayaa aad u tartamaya oo tamardhac ku imanaysaa.24DSHISKA BiriishyadaQALABKA 6:
URURINTA MACLUUMAADKA ISKU
Ujeedada w axbarashada: in xirfad loo yeesho sidii loo qorsheyn lahaa habab
macluumaadka looga soo ururinayo isku dhaca inta aan xalintiisa la gudagalin.
Waqtiga loo baahanyahay: 90 ilaa 120 daqiiqo.
Kaydka loo baahanyahay: xaalad jirta oo layligan gabagabadiisa lagu xusay.
1) Si nidaamsan in macluumaadka iskudhaca loo soo ururiyaa waa macquul
fikrad ahaan, inta badana ficil ahaan dhinacyadu way iska hilmaamaan,
iyaga oo ku dagdagaya sidii xal murankooda ay uugu heli lahaayeen.
Shaqada u mihiimsan ee layligani waxa weeye sidii loo heli lahaa xirfado
lagu fahmo su’aalaha la iswaydiinayo iyo in la diyaariyo habab lagu ururiyo
xogta iyo fikradaha ku saabsan isku dhaca inta aan la galin waqti iyo awood
sidii isku dhaca loo xalin lahaa.
Ka qaybgalayaashu waxa ay u shaqaynayaan kooxo yaryar oo shan ilaa
sideed ka kooban (midkiiba) si ay u diyaariyaan geedi socod xogta iyo
macluumaadka lagu ururinayo oo u suurto galinaya in ay fahmaan dabiicada
isku dhaca xaafada ka dhacay inta aanu “faraha ka bixin” .natiijada
istaraatiijigan xaqiiqa raadiska ihi waxa ay noqonaysaa aas-aaska
istaraatiijiyada arinka lagu guda galayo, si dadkii xaafada daganaa looga
caawiyo khilaafaadkoodii in ay xaliyaan.
Shaqada u horraysa ee tababara ahaan lagaa rabaa waxa weeye in aa d
bixiso dood gaaban oo la hagayo oo ah xaqiiqo raadis iyo baadhitaan.
Malaha sida u dhibta yar ee diyaarinta hawshani waxa weeye in loo noqdo
buugii “Dhiska Biriishyada iyada oo lamarayo tubta qorshaynta ka
qaybqaadashada ”. Marka aad heshid qoraalkaa rasmiga ah ee “qiimaha
leh” eeg cutubka lixaad, halkaa oo aad ka heli koox su’aalo ah oo la
waydiinayo (dadka) si mushkiladda loo fahmo, iyo cutubka todobaad si loo
helo sharax waafi ah oo talooyinka xaqiiqa raadiska iyo macluumaad
ururinta ku saabsan.
Waxaa muhiim ah lix arin oo guud oo la kala dooran karo marka la ururinayo
macluumaadka xaalad la mid ah ta layligan lagu sheegay. Waxana weeye:
cid waraysi, su’aalo waydiin, labadaa oo isku jira, baadhitaan qoraaleed,
eegid toos ah, khibradii kooxda, aqoon iyo malo maskaxeed.25DSHISKA Biriishyada2) Doodan la hagayo ee dhibaato baadhista iyo xaqiiqo raadinta ahi, waxa isla
markaaba ka dambeynaya in ka qaybgalayaashii loo qaybiyo kooxo 5 ilaa 8
xubnood ah si ay u sharaxaan wajiyada ay isticmaalayaan si ay si fiican
uugu fahmaan isku dhicii inta aanay dhicanyadii isu keenin si loo maareeyo
Hawshoodani waa laba: in ay eegaan xogta dheeraadka ah ee ay u
baahanyihiin si loo xaliyo isku dhacan isa soo taraya iyo si ay u eegaan
qalabka xaqiiq raadiska ah ay adeegsanayaan si xogta loo helo.
Waxa lafilayaa in ay ku soo daraan qalab kala duduwan oo wax lagu
qiimeeyo, kan oo qayb ka ah qorshahooda guud ee wax lagu qiimaynayo.
Hawshani waxa ay qaadanaysaa 45 ilaa 60 daqiiqo waxa aad dareensiin
kartaa khariiradii Moore ee waxa dhaliya iskudhaca ku saabsanayd, tan oo
ah qalab lagu ururin karo fikradaha ku saabsan xaqiiqada ay u baahanyihiin
in ay ururiyaan oo ah talaabooyinkii ugu horeeyay xalinta iskudhaca la
Qaar su’aalaha ka mid ah oo ay jawaabo u raadinayaan waxaa ka mid ah:
5.Waa maxay arimaha isku dhaca xudunta u ahi?
Waa ayo cidda ku jirtaa, sidee ayayna uugu jirtaa?
Intee ayuu isku dhacu socday?
Maxaa xalintiisa ilaa imika laga qabtay?
Maxay natiijadu noqonaysaa haddii la waayo si isku dhaca loo xaliyo?3) Marka kooxaha yaryari ay dhammeeyaan hawshan, waxa aad waydiisaa in
ay dib u kulmaan si layliga looga doodo. Koox kasta oo yar waa in la
waydiiyaa in ay qoraal ku keenaan macluumaadkooda guud iyo istaraatiijiga
xog ururinta. Wad dooda adoo waydiinaya su’aalo ay kuwa soo socdaa ka
mid yihiin si aad u dhiiriso aragti iswaydaarsiga:
o Waxyaalaha kooxuhu soo bandhigeen, maxaa cad ee ay iska
shabahaan markii kooxuhu wax qiimaynayeen?
o Waa maxay waxa muhiimka ah ee ay ku kala duwanyinhiin ee aad
o Maxaad is badalo ku samaynaysaa sida kooxdaadu wax u qiimayso
adoo eegaya waxyaalaha kooxaha kala duwani soo bandhigeen.
o Maxay qiimo leedahay xaga aragtidaada in la isticmaalo ururinta
macluumaad habaysan inta aan la guda galin isku dhac xalinta?26DSHISKA BiriishyadaLa taliye
SafarXaalad baadhitaanka waxa laga heli karaa bogaga soo socda.
Xaaladan baadhitaan waxa ay hodan ku tahay waxbarashooyin kale oo suurtagal ah
kana shisheeya hawlaha xaqiiqa raadinta ah ee kor lagu murtiyeeyay.
Waxa aad waydiin kartaa ka qaybgalayaasha aqoon is waydaarsiga bal waxa dhici
kara haddii aan talaaba laqaadin. Shaki la’aan waxa kordhaya suurogalka isku
dhaca. Tusaale ahaan gawaadhidii gaboobay ayaa la dhigay meel kasta oo ka mid ah
goob cusub oo biraha gawaadhida burburtay lagu iibiyo, gawaadhida waawayn oo
jimcayowga iyo maalmaha fasaxa ah imanaya, dayrarka oo la dheereynayo, ay wax
ilaalisa, burburin hanti guud, dad badan oo cusub oo yimaada iyo ………waad
Halkan waa fursad lagu baadhi karo sida isku dhacyadu u xumaadaan.
Bal ka fikir in aad galiso xaalad baadhitaankii mustawa waxbarasho oo cusub, waa
adoo ka qaybgalayaashaadii ka qaybqaadanayay isla kooxa hawleedka yaryar
yidhaah diyaariya istaraatijiyooyin lagaga hadlo khilaafaadyadaasi iyo isku dhacyada
mustaqbalka imankara. Waxa aad ku dari kartaa sharax dheeraad ah xaalad
baadhitaankii (Qaybta II) si loo kordhiyo tayada ay ku iman karto barashada
diyaarinta istaraatiijiyooyin mushkiladaha lagu xaliyo. Tusaale ahaan, waxa aad
kusoo dari kartaa war ku saabsan: riboodhka booliska, shirar la qabtay, kala
duduwanida da’ada, tirada caruurta aan gaadhin da’adii iskuulka, wax qabadkii
dawlada hoose ilaa taariikhdan, heerka shaqo la’aanta magaalada, tirada dadkii
goobta ku raagay oo la barbardhigay kuwa cusub iyo waxyaabo kale.
Waxa aynu hore u sheegnay buuga tababarka ee “qorshaynta ka qaybqaadashada”
oo ah qayb ka mid ah taxanahan. Waxa ku jira layliyo tababareed oo aad isticmaali
karto si aad ka qaybgalayaasha u siisid khibrad mushkilad xalin ah, iyada oo la
adeegsanayo siyaabo khilaafaadka lagu xaliyo oo si toos ah ula xidhiidha mabaadiida
iyo hawlaha maaraynta.BAADHITAAN XAALADEED: ARIN XAAFADEED!
Xaalad Isku Dhaca Oo Doonaysa Faham Iyo Xal
Waxa aad ka mid tahay machad samaynaya baadhitaan bulsho oo ku yaal
goob uu ka socday isbadal bulsho iyo dhaqaale oo dhakhsa ihi tobankii
sanadood ee u danbeeyay, ama mudo intaa ka badan. Waxa kooxdaada laga
codsaday in ay taageero u fidiyaan magaalo yar oo 80km jirta oo xiisad isa soo
tareysaa dhex taal muwaadiniinteeda. Waxa dhawaan dhacay iska hor imaadyo
xunxun. Duqa magaaladu waxa uu leeyahay waan fahmayaa waxa isku dhaca
dhalinaya waxase loo baahanyahay dhugasho qof dibada ah oo si dhab ah oo27DSHISKA Biriishyadaaan caadifad lahayn arinka u eega. Magaaladan oo ay dagan yihiin ilaa
(10,000) oo qof waxay u ahayd suuq iyo xarun adeeg goob beeralay ah, hasa
yeeshee beero badan oo ku xeernaa imika waxba sooma saaraan, hoos u
dhaca wax soosaarka beeruhuna waxa uu saameeyay guud ahaan dhaqaalihii.
Waxa ka jira shaqo la’aan badan magaalada iyo miyiyada ku xeeran.
Duqu markii uu sharaxay xaalada isku dhacyadan u danbeeyay waxa xudun u
ahayd goob gaar ah oo magaalada ka mid ah oo leh guryo la daganyahay.
xaafadaa ay isku dhacyadu u badnaayeen waa meel gabawday oo la
daganyahay oo guryo dhawr ihi banbanaanyihiin, qaar guryaha ka mid ahna
dad lacag leh oo dhul leh oo aan daganayn ayaa kiraystay oo ka kireeyay
qoysas danyar ah oo dhawaan ka soo guuray goobo agagaarka magaalada ah.
Xaafadu waxa ay ku taal dhexda laba laagood oo ku darsama wabi wayn oo
mara xudunta magaalada, Dhulkaa rayska ah ee u dhow laagaha dadka
xaafada ayaa isticmaali jiray si beera yaryar oo guryaha ku yaal wax ay ugu
beertaan. Waxa sii yaraaday dadkii hore u dagnaa ee wax beeranayay,
markaasi ayay gabiyadii laagahaasi isu badaleen meelo qashin qub ah. Dadka
dhawaan guryaha kireystay qof ka mid ah ayaaba soo jiiday gaadhi gaboobay
oo dhigay xaga dambe ee guriga uu galo. Waxa laysla dhexmarayaa in uu ka
dhigayo meelo biraha gawaadhida burburtay lagu iibiyo, maxaa yeelay waxa
aad moodaa in wax qaynuun ah oo u diidayaa aanu jirin.
Qoysaskii hore u daganaan jiray waxa ay goobta daganaayeen jiilal ( da’o)
badan waxana ay ku faanaan in ay ilaalin jireen dhulkooda iyo goobaha ku
xeeran ee banaan si ay u noqoto meel nadiif ah oo hawo fiican. Hase yeeshee
qaar badani maanta waa da’ oo ma, hayaan tamartii ay ku ilaalin jireen
dhulkooda sidii baryihii hore. Waxana ay ka xunyihiin isbadalkan xaafada ku
yimid. Dadkii hore u daganaa xaafadu dhawr goor ayay ashkato u gudbiyeen
booliska iyaga oo ka cabanaya jaararkooda cusub qaylada iyo sawaxanka ay
samaynayaan, iyaga oo aan danaynayn meelaha ay dagan yihiin iyo daryeelka
dhulka banaan, iyo caruurtoodii oo ku ciyaaraysa goobihii dadkaa hore
lahaayeen. Waxa uu u sheegay qof dadkii hore ka mid ihi madaxii kooxda
“Anigu fahmimaay o sida dadku sidan oo kale uugu noolaanay aan ! ma
ixtiraamay aan waxa dadka kale leeyahay, caruurtoodu si bilaa tarbiyad ah ayey
jidadka ugu ciyaarayaan. Waxa ay ku qabanayaan xaflado balbalaadhan
dhulka guryahooda dabadiisa ah oo cid kasta oo goobta dagani imanayso waxa
ay ku tuuraan qasacadaha ay wax ka cabaan iliiladaha, qashinkoodana
gabiyada ayay raaciyaan. Maxay ugu noqon waayeen meeshii ay ka
Inta badan dadka dhawaan xaafada dagay waxa ay ka soo jeedaan isir gaar ah
oo leh qaab nololeed ka duwan ka ay leeyihiin dadka goobtan hore u daganaan28DSHISKA Biriishyadajiray. Dadka cusubi waa bulshaawiyiin, jecel raashinka basbaaska
kulkulayka leh kaasi oo jaararka qaar xataa urtiisa ka cawdaan waxana ay ku
caweeyaan xaflado ay ku raagaan xili jaararkoodii ay seexdeen waxana ay wax
ka soo saaraan iibinta alaabooyin iyo adeegyo ay dhulkan keeneen oo laga
keenay dalal kale. Gawaadhidooda waawayn ayay joojiyaan jidad cidhiidhi ah
oo xaafada ku yaal maalmaha fasaxa ah ee wiiga, taasi oo iyana dadka jaarka
ah ka cadhaysiisay. Arinkan ayaa ka mid ah waxyaalihii qof ka mid ah
baadhayaashu uu ka ogaaday markii u huraysay ee xaalada baadhitaankeeda
la bilaabay. Qofkaa wax baadhayay waxa uu dadkii howsha kula jiray u
sheegay in ay arimahani ay yihiin uun nabarka halkiisa sare. Hadii aan
arinkana dhakhsa wax looga qaban oo khilaafaadka ka jira xaafadan la
maarayn xaaladu-sida qofkaasi sheegay-way kasii dareysaa.29DSHISKA BiriishyadaQALABKA 7:
ARAGTI ISWAYDAARSI .La taliye
SafarTilmaame socdaal: Qalabkani waxa uu aad wax u ool u noqonayaa marka lagu isticmaalo
xaaladaha qaar. Tusaale ahaan qoraaga qoladan u wayni waxa uu u isticmaalay aragtiiswaydaarsiga lagu xaliyo khilaafaadka kooxo saraakiil dawlada hoose ah oo ka kala yimid
bulshooyin kala duwan oo khilaafaad waawayni dhexyaalaan oo danaynaya in ay hagaajiyaan
xidhiidhka shaqo ee dhexdooda yaal waxa wayn ee meesha yaalay waxa weeye iyaga oo jecel in
ay talaabo ficil ah qaadaan.
Waxana uu arkay (qoraagu) in uu kani yahay qalab wax ku ool ah oo gudaha ururada ay ka
jiraan khilaafaadka waawayni lagu ismticmaali karo, khilaafaadkaa oo wax soosaarkii iyo
nafsiyadii saamaynaya dhamaan dadka isku dhacu taabtay.
Hadii uu qalabkani sidaa wax u tarayo, maxaa looga baahanyahay socdaal tilmaamaha? Ma aha
noocii layliga ee ka shaqaynayay xaalada khayaali ah, sida xaalada baadhitaanka ee qalabka 6
Dhab ahaantii waxa la isticmaalay markii buuga tijaabo goobeedka lagu samaynayay, waxoogaa
burbur ahina wuu ka yimid.
Hase yeeshee geedi socodkii aragti â&#x20AC;&#x201C; iswaydaarsigu waxa uu noqday mid tayo badan marba
marka ka danbaysa markii lagu isticmaalay xaalado ay labada dhinac ee isku dhacu rabaan in ay
qaadan talaabooyin wax dhisid ah si ay khilaafaadkoodii u xaliyaan. Waxana aanu kugula
talinaynaa in aad isticmaasho marka aad haysato macmiil (dhinacyo) dhammaan nidar u galay in
khilafaadkooda ama isku dhacooda xal u raadsadaan.
Qalabka 8aad: ee kan ku xigaa, waji ahaan wuu shabahaa kan, markaa eray ama laba aynu ka
nidhaahno inta aynu bixinayno tilmaamahan socdaalka.
Gorgortanka kaalintu waxa weeye qalab la isticmaalo marka la isku seegan yahay fikrado ku
saabsan waxa ay dad ama kooxo dad ihi ka qabanayaan xaalad wax qabasho ku wajahan.
Fikradahaa ayaa loo badalay ficilo kuwaas oo sii adkeeya xaaladii.
Sida qalabka aragti iswaydaarsiga, waxa ay tani aad uuga shaqaynaysaa xaalad dhab ah, in
kasta oo ka qaybgalayaasha tababarku ay habka kaalin is waydaarsiga jili karaan si ay u bartaan
Marka aynu sheegnay sida ay muhiimka u tahay in lagu isticmaalo qalabka 7 iyo 8 xaaladaha
isku dhaca ee dhabta ah oo aan ahayn fadhiyo xirfado lagu dhisayo oo goob aqoon iswaydaarsi
ah, hadaba qalabka lagu ban dhigayo qalabadaasi waxoogaa ayuu sidaa ka duwanaanayaa .
Ujeedada w axbarashada : si dadka iyo kooxaha looga caawiyo in ay xaliyaa n
khilaafaadkooda una xaliyaan mushkiladahooda iyaga oo isticmaalaya iswaydaarsiga
aragtiyaha ay iska qabaan, dadka kalana ka qabaan
Waqtiga loo baahan yaha y : iyada oo la eegayo adayga khilaafaadka dhex yaal
kooxaha isku dhacay, hawshani waxa ay qaadan kartaa maalin dhan .30DSHISKA Biriishyada
Qorshee waqtigaaga adoo eegaya waxa la ogyahay iyo waxa suurta galka ah adoo
xusuusanaya in aad la shaqaynayso dad danaynaya una nidar galay in xidhiidhkooda
isbadal fiican ku sameeyaan.
Ka ydka lo o baahan yaha y: l ayligani waxa uu ku xidhan yahay dhinacyada isku
dhacay adoo samaynaya liis fikrado iyo xog ah oo ku saabsan xidhiidhkooda shaqo.
Waxana aad u baahan doontaa waraaqaha waawayn ee la rog-rogo, sabuurad,
qalimo wax lagu calaamadiyo, “ shariid” xabag ah ama xabag kale, si midhaha
awooda la bixiyay loo soo ban dhigo oo ay u arkaan dhammaan ka qaybgalayaasha
layligu. Waxa kale oo aad u baahantahay laba qol oo kala duwan, si labada dhinac ee
iskhilaafsani ama isku dhacay si xor ah xubnahooda uugula hadli karaan si
liisaskooda u diyaarsadaan.
Waxa kale oo aanu rumaysanahay in loo baahanyahay laba la taliye-sahle oo layliga
soo gala si labada kooxoodba u haystaan cid caawisa inta ay shaqadooda
gudanayaan iyaga oo kooxo goonigooni ah.Geedi socod:
Baahida loo qabo shaqo gogol dhig ah shirka hortii:Geedi socodka dhabta
ah ee aragti isw ayda arsigu waa mid fudud Waxa ka mid ah iyada oo ay dhex
marto wax curin iyo iswaydaarsi fikradeed ama xogeed dhinacyadii isku
dhacay. Isla mar ahaantaa waa geedi socod murugsan maxaa yeelay waxa
arinka ku jira dad iyo kooxo ama ururo uu nooc isku dhac ihi dhexyaal.
Iswaydaarsiga dhabta ah ee aragtida waxa caadi ahaan hormara shirar taxana
ah oo hawlgalid ah oo dhex mara la taliyaha-hawl-fudaydiyaha ah iyo labada
dhinac ee muujiyay in ay rabaan in ay isu yimaadaan si ay uuga shaqeeyaan
khilaafaadkoodii.(eeg buuga qorshaynta ka qaybqaadashada si aad u aragto
tilmaamaha qeexan ee shirarka heshiiska hawl galinta ee dhexmara la taliyaha
iyo macmiilka). Marka ay labada dhinacba waafaqaan in ay isu yimaadaan,
waxa weeye in aad samayso goob kulan oo dhex ah dadkana raaligalisa
halkaa oo ay ka dhici doonaan fadhiyada aragti-iswaydaarsiga iyo mushkilad
Fadhi yo h awleedka: marka hor dhaca la sameeyo ee lala yimaad layligii hadal
bilowga, ugu sharax geedi socodka si qeexan dadka aragtiyaha iswaydaarsan
doona. Marka la is waydiiyo su’aalo lagu caddaynayo geedi socodka, waydii
labada kooxood ee isku kacsan in ay kala gooni u shiraan si ay u diyaariyaan
sadex liis oo ku saabsan fikradaha xidhiidhka labada kooxood dhexdooda ah.
Qaybtan geedi socodka ka mid ihi waa mid waqtiga cunaysa. Markaa waxa aad
waydiisa in ay war kugu soo celiyaan saacad gudaheed, waxa se aad u diyaar
garowdaa in aad kordhiso hadii loo baahdo.
Hawshooda marka ay gudanayaan iyaga oo ah laba kooxood oo kala gooni ihi
waxa weeye in ay diyaariyaan jawaabaha sadexdan su’aalood:
Sidee ayaynu nafteena u aragnaa inaku marka la eego khilaafadka ina dhex
yaal kooxda ama ururka kale?
Sidee ayaanu kuu aragnaa, hadii aad tahay kooxda aanu isku dhacnay?
Sidee ayaanu isleenahay waad noo aragtaa ?31DSHISKA Biriishyada
4-Dib u kulansii labada kooxood waxana aad waydiisaa in ay bandhigaan
jawaabahooda liiska hore, sida ay naftooda u arkaan.Waydii oo kaliya su’aalo
aad rabtid in ay wax kuu caddaadaan, hala doodin, haburin waxa ay maqleen.
Wad aragti iswaydaarsiga, koox kastana ha bandhigto liiskooda labaad,
su’aalihii wax caddaynta ku xigsii iyo ugu danbayntii waa in koox kastaa soo
bandhigaan liiskii ugu danbeeyay ee fikradaha ahaa.5-Talaabada xigtaa geedi socodkan waxa weeye in kooxuhu liiskooda is garab
dhigaan oo eegaan meelaha ay iska waafaqsanyihiin. Waxa doodaa xigaya in
si ballaadhan loo eego fikradaha laysku diidan yahay sababtu waxa ay doonto
ha ahaatee. waxa laga yaabaa in ay ka dhalatay is faham la’aan, xog qaldan,
ra’ayi qofka ku qufulan, eexasho, ama sababa kale. Waxana ay kuwaasi u
baahanyihiin in si ballaadhan loo baadho waxa yaala meesha ee dhalinaya in
ay noqdaan arimahaasi ilaha khilaafka keena ama isku dhaca.6-Bandhiga iyo doodaha kadib, waxa aad waydiisaa kooxaha in ay kala gooni u
kulmaan mar kale, markan waxa aad waydiisaa koox kasta in ay curiyaan laba
liis oo cusub oo lagu qorayo waraaqaha bal ballaadhan ee laalaabma :A)Anaga oo eegayna waxa aan ka baranay xog iswaydaarsigan, waxa aanu
diyaar u nahay In aanu samayno wax yaalaha soo socda si ay nooga
caawiyaan khilaafaadkayaga in aynu xalino.
Iyo, waxa aanu kaa rabnaa in aad qabato waxan soo socda si aad inooga
caawiso in aana xalino khilaafaadkeena.B)Waxa aad ku siisaa hawshan kooxaha ugu yaraan saacad, si dagana u kormeer si
aad u hubiso in ay haystaan waqti ku filan oo ay hawlahan ku dhammeeyaan.
Xusuusnow in ay isku dayaan in ay gaadhaan heshiis ku saabsan arin kasta oo
liiskooda ku jira oo ay “rabaan” ama “bixinayaan”7) Marka ka qaybgalayaashu ay dib u kulmaan waxa aad waydiisaa riboodho labadakooxoodba, waxana aad siinaysaa waqti ku filan si loo caddeeyo arin kasta oo aan
Riboodhada ka dib. Waxa aad waydiinaysaa kooxaha in ay markale kala gooni u
shiraan. Xiligan, waxa aad u sheegtaa in ay qaataan liiska kooxda kale waxa ay
rabaan ku sheegteen, markaa waxoogaa daqiiqado ah ha go’aamiyaan
jawaabtooda ku saabsan waxa kooxda kale iyaga ka rabto. Sadex waji oo
wanaagsan oo ay ku jawaabikaraan waxa weeye:
a) Tan si fudud ayaanu u fali karnaa; maba aanu garanayn in waxani yahay wax
Waanu rabnaa in sidaa aanu yeelno, hase yeeshee waa haddii laydinka
Taasi mayeeli karno maxaa yeelay………..
Sii kooxaha yaryar saacad kale si hawshan ay u dhammeeyaan.32DSHISKA Biriishyada
8)Marka ka qaybgalayaashu dib u kulmaan waa in qof afhayeen ah oo koox kasta
leedahay qeexaa macluumaadka. Xiligan, ku dhiiri ka qaybgalayaasha in ay
dhagaystaan oo ay waydiiyaan oo kaliya su’aalo ay wax caddayn ku
raadinayaan.9)Marka la sameeyo bandhigyadaa ee nuqdad (qodob) kasta oo aan la fahmin
ama murugaysanayd la caddeeyo, waxa jira dhawr talaabo oo aad qaadi karto si
aad u hubiso in nidar galkii ay qaadeen ay fuliyeen. Khibradayadii isticmaalka
geedi socodkan aaanu ka helnay xaga habka gorgortanka ee loola tacaalo
khilaafaadka iyo isku dhacyada suurta galka ihi waxa ay ahayd mid fiican.
Inta badan, ka qaybgalayaasha “aragti iswaydaarsigu” iyaga ayaa la wareega
geedi socodka marka halkan la gaadho waxana ay soo jeediyaan siyaalihii ay
toos ugu wada shaqayn lahaayeen iyaga oo ah kooxo yaryar oo isku badhxan si
ay u xaliyaan khilaafaadka qaybinaya.10)Marka ay khilaafoodkooda xaliyaan, waa in aad sharaftaa nidar galkoodaa adoo
siinaya taageeradii ay u baahnaayeen si si wada jir ah loo dhigo qorshayaal
hawleed iyo istaraatijiyooyin kormeer iyo qiimayn.
Mar kale waxa aanu kugu celinaynaa in aad xigato buugii qorshaynta ka qayb
qaadashada halkaa oo aad ka heli karto waxyaalo kugu filan oo kaa caawinaya
sidii aad taageero u siinlahayd kooxaha si ay u diyaariyaan qorshayaashii
hawlgalka iyo istiraatiijiyooyinkii kormeerka.11) Noocyada caynkan oo kale ah ee khilaaf xalinta ah, iyo fadhiyada mushkiladxalintu waxa ay mudan yihiin abaal marin. Markaa waa in aad qorshaysaa qado
ama xaflad bulsheed lagu xusayo waxaa ay fuliyeen.33DSHISKA BiriishyadaQALABKA 8:
KAALIN KA GORGORTANKA
Xusuusin ahaan, qalabkan waxa loo qorsheeyay in lagu isticmaalo si loo caddeey o
kaalmaha iyo xidhiidhyada u dhaxeeya dadka, kooxaha, ama ururada la kulmay dhib
xaga wadashaqaynta ah. Iyada oo qalabkan loo isticmaali karo aqoon iswadaarsiga
xirfada lagu hormarinayo ee ku saabsan maaraynta isku dhaca iyo khilaafaadka, hadana
waxoogaa bad-badal ah ayaa loo baahanyahay in tilmaamaha lagu daro si uu u noqdo
mid la jaan qaada ujeedooyinkaaga waxbarasho.
Ujeedooyinka w axbarshada: si loo caddeeyo loona badalo waxyaalaha laga
filayo kaalmaha iyo xidhiidhada dadka, kooxaha, kooxo hawleedka, ama
ururada ay dhibi wada shaqaynta ka haysato.
Waqtiga loo baahanyahay: waxa ay ku xidhan tahay inta ay adagtaha y
kaalintaasi ee uu madmadowgu ku jiraa, waxase aad qorshaysataa waqti aan
180 daqiiqo ka yarayn si loo gaadho heshiis raali laga yahay.
Kaydka loo baahanyahay: waxa aad u baahan tahay goob dagan oo gaar ah
oo ballaadhan si ay u deeqdo dadka aad la shaqaynayso, si aad kaalin ka
gorgortanka u fuliso.
Way fiican tahay hadii la helo waxoogaa “foomam” ah oo ka qaybgalayaashu
ku qoran karaan heshiishkooda ku saabsan sida ay u qorshaynayaan wada
shaqayn tayo badan.
Tusaalooyin ayaad ku arki doontaa gabagabada sharaxa geedi socodkan.
Geedi socod :1- Geedi socodka aanu rabno caddayntiisu waxa uu ka soo qaadayaa in aad gaadhay
heer labadii kooxood diyaar u yihiin in ay isu yimaadaan iyada oo qof hawl fududeeyi
ihi caawinayo si loo caddeeyo arimaha kaalmaha, masuuliyadaha iyo xidhiidhka.
Iyada oo buugagan taxana ihi ku waajahan yihiin inta badan xidhiidhada ay ururada
bulshadu(NGO/CBO) la leeyihiin dawladaha hoose, waxaanu qoraalkan u
isticmaalnay in geedi socodka la qeexo. Waxa aad kartaa in aad jilayaasha badasho
aanu ku isticmaalnay wax yaalahan sharaxa ah si ay ula jaanqaadaan haybta
qolooyinka codsaday taageeradaada, si looga gorgortamo kaalmaha gaarka u ah,
iyada oo u jeedadu tahay in la helo sidii si tayo leh loo wada shaqayn lahaa.
2 - Waxa aad ku bilaabaysaa geedi socodka adoo yeelanaya dood la hagayo oo ku
saabasan waxa geedi socodkan looga jeedo iyo waxa lagu xaqiijin karo kaalin ka
gorgortanka, waxa aad halkan ku arki fikrado ku saabsan waxa fadhiyadan hordhaca
ah lagu soo qaadayo.34DSHISKA Biriishyada
•••3-Kaalin ka gorgortanku waxa weeye geedi socod isku jira oo dadkii arinka ku jiray ay
ka gaadhayaan go’aan dhex ah kaalmahooda si ay si tayo leh u wada shaqayn
Kaalintu halkan kuma koobna waxa ururka loo xilsaaray ee qeexan waxase soo
galaya dhammaan waxa aan rasmiga ahayn ee layska fahamsanyahay iyo
heshiisyada, waxyaalaha la filayo iyo wixii la diyaariyay ee isbiirsady ee sharaxaya
Waxa ay farsamadu leedahay, dadka intooda badani waxa ay jecelyihiin in ay ka
doodaan siyaalo ay iskula xidhiidhi karaan una wada shaqayn karaan, halkii ay ku jiri
lahaayeen xaalad isku dhac oo aan la xalin, iyo khilaafaad iyo isfaham la’aan.
Gorgortanku waxa uu leeyahay waxoogaa khatar ah. Ka qayb galayaashu waa in ay u
furfuran yihiin is badalada ay rabaan in dadka kale ay ku sameeyaan dhaqankooda
kaalin ahaaneed iyo suldadooda iyo masuuliyadooda, si hore loogu mariyo nooca iyo
adeega xidhiidhkooda wada shaqaynta. Heshiisyada laga gaadho kaalin ka
gorgortankan waxa la rajaynayaa in la ixtiraamo. Hadii taasi dhici waydo, xidhiidhkii
wada shaqyntu intii hore waa uu ka sii xumaanayaa.
Waxa jira xeerar muhiim ah oo lagu hubinayo in la helo geedi socod kaalin ka
gorgortan ah oo guulaysta. Ugu horayn, ma aha sharci in aad dhinaca kale qodqodo
dareemadiisa iyo caadifadiisa. Kaalin ka gorgortanku wuxuu ku saabsanyahay yaa
wax cid ku sameeyey sidee ayaanu u sameeyay. Ta labaad, waxa laga filayaa
dhammaan dhicanyada gorgortanka in ay daacad yihiin oo u furfuran yihiin xaga
dhaqankooda iyo dhaqanka dadka kaleba oo ay nidar ku galaan in ay ku shaqeeyaan
qeexid cusub oo kaalma ah, tan oo hagi doonta xidhiidhka wixii imika ka bilaabma.
Ta sadexaad: gorgortanku waxa weeye geedi socod laba haad ah. Wax marka aad ka
codsato dhinaca kale, waxa la socda in dhinicii kale la siiyo wax badal ah. Ugu
dambayn lama ogola dhaqano hanjabaad iyo cidhiidhi saarid ah, si loo gaadho heshiis
loo dhan yahay oo ay ogalaadaan labada dhinacba.
Heshiisyada lagu gaadho geedi socodkan gorgortanka waxa la rajaynayaa in lagu
diyaariyo qoraal ahaan oo dhinacyadu dhammaan ogolaadaan.
Doodaa la hagayo ka dib ee cuskanaysa nuqdadaha imika uun la sheegay, waydii
koox kasta oo la xidhiidha kaalinta laga gorgortamayo in waqti waxoogaa ah ay ku
qaataan ka jawaabida weedho hawleedka soo socda. Iyada oo weedho hawleedkani
geedi socodka kaalinta laga gorgortamayo ee u dhexaysa
hogaamada dawlada hoose iyo ururada bulshada, sida ururada aan dawliga ahayn
(NGOs) iyo ururada bulshada (CBOs), waad badali kartaa erayada si ay u
milicsadaan xaalado kale. Sida kaalinta laga gorgortamayo ee dhex taal kormeere iyo
koox hawleed, kuwaas oo galay xidhiidh shaqo oo xumaaday, ama dhexda laba
hoggaamiye waaxeed oo raba in ay si aad u taya badan u wada shaqeeyaan. Imika
waxa aad halkan ku arki weedho hawleedkii aanu ku ballan qaadnay. Waxa looga
jawaabi karaa qof ahaan, markaa ka dib waa la isu gayn karaa hadii ay jiraan qof in
ka badan oo matalaya dhinacyada qorgortamaya, ama kooxda ayaa isu gaynaysa
iyaga oo wada shaqaynaya.
Way wanaagsan tahay waliba hadii arimahaa lagu liis gareeyo waraaq caadi ah si
dadku dhammaan ay mar kaliya u wada arki karaan. Tusaale ahaan :35•
Hadii adiga iyo urur kaagu arimaha soo socda aad u qabataan si badan ama fiican
, taasi aniga iyo ururkayga waxa ay ka caawinaysaa in tayadayadu ay korodho.
Hadii adiga iyo ururkaagu aad yaraysaan falitaanka waxa soo socda, amaba
joojisaan falisteeda, waxa ay aniga iyo ururkaygaba taasi ka caawinaysaa in
Waxyaalahan soo socda oo adiga iyo ururkaagu aa qabanayseen ayaa aniga iyo
ururkaygaba caawiyay si aan u tayo badano, waxana aanu rajaynaynaa in aad
adna wadi doonto falista hawshaa .4- Marka dadka ama ururada ergadoodu ay dhammeeeyaan qorshaha qabyada ah eeweedhahan, waxa aad ku tidhaa soo bandhiga halaga doodo eh. Goobtan geedi
socodka ka mid ah, waxa aad ka rabtaa in ay u caddahay arimaha ay rabaan in ay ka
gorgortamaan, ma aha inay wax uun ka hortagaan. Marka intaa la yidhi :waxa haboon
su’aalo odhanaya: “waa maxay?, maxay sidaasi u dhacday? Iyo goorma? Weedho se
looma baahna.5- W a y d i i d h i n a c y a d a g o r g o r t a n k a i n a y d o o r t a a n a r i m o l i i s k a k u j i r a o o a y s i d h i b y a r uogolaan karaan falistooda, ama joojin karaan, ama si kale oo duwan labada dhinacba
u fali karaan xaga xidhiidhka si ay dhinac kasta uuga caawiso in ay tayo dheeraad ah
oo wada shaqayna yeeshaan. Tani waa si dhakhso ah oo lagu heli karo guul iyo
horumar xidhiidhka shaqo ah. Qoro inta ayna kaaga dhex lumin arimo ad-adag
dhexdood oo talaabooyinka xiga ee geedi socodka laga gorgortami doono ah.
6- Goobtan kaalin ka gorgortanka waa in labada dhinacba aad tidhaa diirada saara
arimaha soo hadhay ee iyaga aadka muhiiimka uugu ah ee hore u marinaya iyaga
tayadooda iyo waliba nooca xidhiiidhkooda shaqo.
Sida caadiga ah gorgortamadani waxa ay u dhacayaan sidan “waxa aanu rabnaa in
aanu qabano …hadii aad adigu rabto in aad samayso …” “ama , “sidaa ma samayn
karno” maxa yeelay” siday doonto ha ahaatee waa in labada dhinac ay awoodaan in ay
curiyaan waxyaalo cusub oo badal ah oo ka caawiya mid kasta in ay tayo bataan.7- Gorgortanku waxa uu dhammaanayaa marka ay dhinacyadii ay dhammeeyaan wax
kasta oo suurto gal ah si ay u hagaajiyaan xidhiidhikooda shaqo iyo wax ku
oolnimada urur kasta iyo hoggaan kooda iyada oo la cuskanayo natiijooyinkii
gorgortanada. Waa in aad qortaa heshiiskii adoo intaad karto si gaar ah wax u
qoraya, waxana aad isticmaalaysaa foomka (warqada) lagu siiyay, amaba warqada
kale (foom) oo aad ugu haboon labada dhinacba(qolaba).
8- Ku xidh gorgortanka adoo waydiinaya dhinacyada in ay milicsadaan khibradoodii36DSHISKA BiriishyadaHESHIIS LAGA GORGORTAMAY OO DHEXMARAY
Waxa aanu u ogolaanaynaa si wada jir ah in aanu qaadano kuna shaqayno
isbadalada ku yimid kaalinta wax qabashada ee hoos ku xusan:
anoo ergo ah matalaya _________________ waxa aanu ogolnahay in aanu qabano
……Anoo ergo ah matalaya ____________________ waxa aanu ogolnahay in aanu
qabano waxan(Ururka magaciisa)3711-DSHISKA Biriishyada…………………………………………………………………………………………………
…38DSHISKA BiriishyadaQALABKA 9:
ISTARAATIIJIYOOYINKA ISKU DHAC
Ujeedada Waxbarashada: in la kordhiyo fahamka shanta istaraatiijiyo ee
iskudhac maaraynta iyada oo la cuskanayo tusaalihii Kenneth Thomas iyo
goorta la isticmaalayo iyo goorta aan la isticmaalayn.
W aqt i ga loo baaha n yah a y: 90 daqi iqa dood.
1 . Ku bilow geedi socodka dood ku saabsan tusaalaha Thomas ee iskudhacmaaraynta ee ku xusan cutubka 3 ee la socda “akhriyaha”. Ku liis garee oo sharax
shantii istaraatiijiyadood waraaqaha balballaadhan ee laalaabma kana fikir xaalada
la yaqaan oo lagu caddeeyo mid kasta. Waxa aad tilmaamtaa in aanay jirin
istraatiijiyooyin sax ah ama khalad ah. Isticmaalka iyo haboonida istaraatijigu waxa
ay ku xidhan tahay nooca isku dhaca iyo waliba dhaqanka lagu isticmaalayo.
Layliguna fursad ayuu u yahay ka qaybgalayaasha ay ku qiimaynayaan wanaaga
iyo xumaha shanta istiraatiijiyadood iyada oo la cuskanayo khibradaha gaarka ah
ee qofka iyo khibradaha ka qaybgalayaasha kale (ee weheliya).2 . Waxa aad samaysaa shan koox hawleed, waxana aad u xilsaartaa koox kasta mido
oka mida shantii qaab ee iskudhaca iyada oo laga soo xiganayo tusaalihii Thomes:
tartankii, wax wada qabadkii, isku tanaasulkii, diidmadii, iyo la jaanqaadkii.
Shaqooyinkooduna waxa ay noqonayaan :
Inay tilmaamaan xaalada ay istiraatijiga isku dhaca ee loo xilsaaray ay ku
haboontahay in lagu isticmaalo.
Goorta aanay haboonayn in la isticmaalo, iyo
Guud ahaan faa’iidooyinka iyo khasaaraha isticmaalka istaraatijiga lagu maareeyo
isku dhaca iyo khilaafaadka3 . Kulmi ka qaybgalayaasha waxana aad waydiisaa koox hawleed kasta inay qoraanwaxa ay gaadhaan. Ka samee dood faaiidada khariidadan fikradeed ee ku saabsan
maaraynta isku dhaca khilaafaadka.1T a r t a n k a : hal adaygnimo iyo dhaganaan iskaashi aan lahayn oo xooga saaraysa
danaha gaarka ah adoo iska indha tiraya dadkii kale.2L a q a b s i : dhaqan aan qofku wax ku dhaganayn, iskaashina ku dhisan oo uu ka
tagayo danihiisii gaar si uu u raali galiyo danihii dadka kale.3D i i d m o : wax ku dhag la’aan iyo iskaashi la’aan oo aanu qofku dantiisana wadan
danihii dadka kalena aanu wax ka qabanayn.39DSHISKA Biriishyada4 W a x w a d a q a b s i : hal adaygnimo iyo iskaashi isku jira oo xoogga la saarayo
la shaqayntii dhinaca kale si loo fuliyo danahaagii iyo danihii cida kaleba.
5 I s k u t a n a a s u l ( meel dhexe ah):
waa meel dhexdhexaad u ah hal
adaygnimadii iyo iskaashigii oo inta badan lagu magacaabo kala firdhinta
khilaafaadkii oo loo raadinayo goob dhaw oo dhex ah.Istiraatiijiyooyinka Isku Dhac Maaraynta
Waxa la cuskanayaa tusaalihii Kenneth
SareIskaashiHal adaygTartanIsku tanaasul( m eel a yn) l a qabsiDiidmoSareHoosIskaashi40DSHISKA BiriishyadaQALABKA 10:
JILISTA KAALINTA GORGORTANKA.
Ujeedada w axbarashada: si loo helo tababar xirfadeed oo ku saabsan geedi socodka
Waq ti g a l o o b aah an ya h a y: s a ac ad i l aa s aac ad i yo badh, wa anay k a b adan k art a a
iyadoo ku xidhan sida aad goosato in layliga aad u fuliso.
Ka yd k a l o o b aah an yah a y: N uq ul o s haraxi i baadhi s t a xaal a da oo l a s i i nayo dham m aa n
ka qaybgalayaasha (qaybtii koowad), nushkhado (nuqulo) kaalmaha kala duwan ah oo la
siinayo ka qaybgalayaasha raba in kaalmaha ay gutaan, iyo warqadii shaqada ee
kaalinta goobjoogaha oo la siinayo kuwa kale.
Geedi socodka: qaabkan gorgortanka ah waxa loo qorsheeyay in ka qaybgalayaashu
khibrad u yeeshaan fursada galitaanka gorgortanka maslaxada (danta) ku dhisan, iyada
oo lagu dhiirinayo in ay iyaga oo xaalada eegaya soo hooyaan wixii u fiican ee la heli
1- Dib u eeg cutubka shanaad ee akhriyaha, waxaana aad xusuusisaa ka
qaybgalayaasha qaar ka mid ah nuqdadahii aasaasiga ahaa ee ku jiray gorgortanka
mabda’a leh. Waxa aad tilmaamtaa faraqyada u dhexeeya baayacaada
maslaxaadeed oo la barbardhigayo ka mawaaqifta. Kuwa gorgortankoodu
cuskanayo mawqif waxa ay imanayaan sidii qaar dood wada. Waxa ay soo
bandhigayaan arinkoodii, meel adag ayay istaagayaan, marka ay u baahdaana wax
isla eegid ayay galayaan.Dadka uu mawqif gorgortankoodu cuskanayo inta badan
waxa ay aduunka u arkaan wax laysku gaygaynayo (xisaab). Tusaale ahaan meel
go’an uun bay ku wareegaan. Waxana ay arkaan in waxa qofka kale gorgortan kaa
ku helo uu ka go’an yahay wixii ay heli lahaayeen.
Dhinaca kale marka qof gorgortankiisu yahay eegida maslaxada labada dhinac,
waxa laga yaabaa in uu ka bilaabo mawqif, hase ahaatee waxa uu dhakhso uugu
guurayaa baadhitaanka sababta khilaafkoodani u jiro. Marka la yidhaa maxaa
keenay waxa eraygaasi furfurayaa in la eego “sidee ayaynu waxan meesha yaala u
qaybsanaa” oo dhakhsa isugu badalaya geedi socod firfircoon oo mashkaladii lagu
baadhayo oo xal lagu raadinayo, iyada oo laga shaqaynayo danta dhinacyada
gorgortanka dhammaantood, oo aan la eegayn mawaaqifta gunta u taala ee ay
milicsanayaan geedi socodka gabagabadiisa.2- Waxa aad u dhisi kartaa layligan siyaabo badan adiga oo eegaya waqtiga aad
haysato, tirada dadka aqoon iswaydaarsiga jooga, iyo waxa aad rabto in aad f uliso,
haddii aad rabto si fudud in aad u tilmaamto waxa u dhexeeya gorgortanka
maslaxada iyo ka mawqifka, waxaba ku filan jilitaanka kaalin kaliya oo la raaciyo
dood lahagayo oo la eegayo wixii ka dhacay xaaladii kaalin jilitaanka. Hadii aad
rabto in aad fursad siiso tiro badan oo ka qaybgalayaasha ah si khibrad toos ah
gorgortanka ay ugu yeeshaan , waxaad u qaybin kartaa tirada guud ee kooxda41DSHISKA Biriishyada
sadex kooxood oo yar yar, iyada oo laba ay falayaan kaalmihii is baayacaada
midna uu goobjooge noqonayo.
Adoo maleenaya in jidka hore ee imika uun la sheegay aad qaaday, u qaybi ka
qaybgalayaashii kooxo yaryar oo sadex ah waxana aad tidhaa go’aamiya cida
qaadanaysa kaalinta qofka (Maroni) ama magacaad doonto ku sheeg qofkaa iyo
qofka (Swartz) oo noqonaya goobjoogihii. Waxana aad siinaysaa dhammaan
nuskhadihii sharaxayay gorgortanka waxana aad waydiinaysaa in ay qaataan mar
amaba laba jeer si ay u akhriyaan. Waydii su’aalo aad ku doonayso wax caddayn.
3- Dhiib labadii kaalmood iyo goobjoogaha su’aalihiisii waxana aad u sheegtaa in ay
raadsadaan meel dagan oo ay ku qabtaan gorgortankooda. Waxa aad waydiisaa in
ay akhriyaan sharaxyadii kaalinta oo ay qaataan waqti ah labaatan ilaa sodon
daqiiqo si ay u dhammaystiraan geedi socodka
4- Kulan u qabo kooxihii yaryaraa, waana in goobjooge kastaa uu riboodh ka bixiyaa
heshiiskii ay labada gorgortame gaadheen iyo wixii ay rabaan in ay ka yidhaahdaan
5- Ku gabagabee fadhiga in ay ka qaybgalayaashu si wada jir ah uga fikiraan
sifooyinka sharaxaya waji mabda’a ku dhisan oo gorgortanka loo maro. Una diyaar
garaw in aad buuxiso wixii ay nuqdado halmaamaan.42DSHISKA BiriishyadaXAALAD BAADHIS:
DARYEELKA XARUNTA XANAANADA
MAALINIMO EE XAAFADDA:
XAALAD LA BAADHAYO SI XIRFADAHA
GORGORTANKA LOO HAGAAJIYO.
Gabadha Shuba Maroni waxa ay gacanta ku haysaa xarun xanaano oo
maalintii ah, oo ku taal xaafad dan yar ah, oo ah meesha la yidhaa Timarash.
Shaqadeedu waxa ay ahayd mid caan ka noqotay dhinaca macaamiisheeda oo
laga aqoon-saday dhinaca dawlada hoose ee magaalada iyo rugta ganacsiga
sida ay uuga qayb qaadatay xoojinta dhaqaalaha dalka. Waalidiinta in ka
badan 70% caruurta aan da’dii iskuulka gaadhin ee la xidhiidha barnaamijkani
waxa ay ka shaqeeyaan warshad kabaha samaysa oo afar sakadood goobta u
Nasiib darro se, waxa laga yaabaa in mudadii kiradu ka dhammaato, waana in
ay heshaa goob kale inta mudada afarta bilood ah ee u hadhay ayna
dhamaanin. Waxa ay haysaa fikrado ku saabsan sida ay shaqo dheeraad ah
ugu qaban lahayd dadka xaafada dagan, waxase ay u baahan tahay guri
ballaadhan. Ta kale waxa ay ka walaacsantahay in ay lacag galiso hagaajinta
guri kira ah, oo hadana lagu qasbo mustaqbalka inay iskaga baxdo. Waxana u
suurta galay in ay ururiso lacag dhan shan kun oo doolar sanadadii dhawrka
ahaa ee tegay, iyada oo rajaynaysa in ay u suurta gasho inay dhis iibsato.
Josef Swartz, oo ah baayac mushtar, ayaa maqlay in Ms. Maroni laga saarayo
gurigii dhawr bilood ka dib oo ay jeceshahay inay iibsato guri xaafada ku yaala.
Waxa uu ku yidhi Ms Maroni markii uu kala xidhiidhay waxa ay rabto, “waxa
aan leeyahay dhis baayac mushtar oo gaboobay oo imika layskaga tagay oo
xaruntaada sadex sakadood u dhexeeyaan. Baahidaadana si fiican u
daboolaya. Dhab ahaan waxa meeshu u baahantahay waxoogaa shaqo ah si
ay wax u noqoto taana waxa aan hubaa in aynu ka wada shaqayn doono”43DSHISKA BiriishyadaLabadoodii ayaa dhawr cisho ka dib kulmay si dhiskii loo eego. Shuba markiiba
meesha way ka heshay waxase ay ahayd gabadh baayacmushtar ah oo
xariifad ah wayna qarisay dareenkeedii oo umay muujin Josef. Markii ay
waydiisay inta uu siinayo dhiskan waxa uu ku jawaabay “waxa aan rabaa
(50,000) oo doolar”, waxa ay markiiba ugu jawaabtay “ waa aad ciyaaraysaa!
Anigu goob xanaano ayaan haystaa ee ma haysto goob dhaqaale” isna waxa
uu ku jawaabay “ waxa aan hubaa in aynu wax isla eegi” intii ayna ka tagin
dhiskii, waxa ay ku heshiiyeen inay dhawr maalmood ka dib kulmaan, bal si ay
isula eegaan in heshiis ay ka gaadhi karaan iibka dhiskaa.44DSHISKA BiriishyadaTILMAAMO U GAAR AH GABADHA MARONI
Waxa aad la hadashay bank dalka ah, waxa ay ku amaahinayaan (45,000) oo doolar oo
kaliya si dhiska aad u iibsato. Waxa kale oo aad la hadashay shirkad wax dhista si
guriga ay u cusbonaysiiso inta aanad xaruntaada xanaanada soo rarin, waxana ay
kharashkii dib u dhiska ku qiyaaseen (7,000) oo doolar. Qiimaha wareejinta farniijarka
iyo qalabkaaga laga soo rarayo dhiskii hore ee loo soo rarayo dhiska cusub waxa lagu
qiyaasay (3,000) oo doolar. Marka laysku wada geeyo qiimaha dhiska, iyo kii
cusboonaysiinta iyo kii guurista waxa ay noqonayaan (60,000) oo doolar. Imika waxa aad
haysataa (5,000) oo doolar oo aad biirsatay. Marka amaahda loo geeyo waxa is dhimaya
lacag dhan (10,000) oo doolar, intaasi faraqa ah ma kartid , mase rabtid in fursadani
guri iibsigu ku dhaafto, maxaa yeelay waxa aad is leedahay baahidaadii ayay
Waxa jira dhis yar oo dhiskan ka danbeeya oo aanad u baahnayn, waxana aad is
leedahay waa la kirayn karaa, mase jeclid in aad qaado masuuliyadaa. Waxa kale oo
aad maqashay in ninka Swartz uu leeyahay shirkad yar oo gawaadhi wax ku gurta.
Marka la eego lacagta qiyaas ahaan kaa soo gali karta caruurta dheeraadka ah (ee la
qoro) wax ayaad meelayn kartaa, waxana aad kartaa in aad siiso Swartz (50,000) oo
doolar, hadii uu ogolaado (4,000) oo doolar oo lacagta guud ka mid ah in bil bil loo bixiyo
mudo laba sanadood ah. Mase hubtid in uu ogolaan doono, oo aanu codsanayn in
lacagta dhammaan markiiba uu qaato. Xataa hadii uu ogolaado in (4,000) oo doolar uu
bixinteeda dib kuugu dhigo, wali waxa kaa dhiman (6,000) oo doolar oo soo galaya
kharashkii lagu qiyaasay cusboonaysiinta iyo raritaanka. Waxa aad diyaar u tahay in aad
gorgortan ka gasho heshiiska guud ee kuu suurta galinaya in aad u soo rarto xaruntaada
xanaano maalmeed goobtan cusub marka kiradan socota xiligeedu dhammaado. Si kasta
ha ahaatee waxa kaa go’an in aad hesho heshiiska uugu fiican.Tal oo yi n ni nka Sw ar t z u gaar ah.
Diyaar uuma tihid in aad hoos u dhigtid sicirka dhiskan. Waxase aad jeceshahay in aad
dhiskan ka iibiso gabadha Maroni, sababa qof ahaaneed awgeed. Hooyadaa waxa ay ku
dhalatay guri yar oo ku yaalay goobta dhiskan, intii aan dhiskan baayacmushtarka ah
aan la dhisin. Caruurnimadeediina waxa ay ku qaadatay ( hooyadaa) xaafadan intii
aynay qayb kale oo magaalada ah u guurin .waxana ay aad ugu firfircoonayd taageerada
barnaamijyada bulshada ee caruurta danyarta ah, intii aanay dhawr sano ka hor
geeriyoon. Waxa maskaxdaada ku soo dhacay in ay fiican tahay in xarunta xanaano
maalmeed lagu magacaabo “hooyadaa” si loogu sharfo, Mase hubtid sidii arinkaa aad
uugu bandhigi lahayd gabadha Maroni.
Intii aanad go’aanka gaadhin iibinta dhiska waxa aad ka fikirtay in aad u badasho dhiska
yar ee ka danbeeya xafiis maamula shaqadaada alaab gaadhi ku gurka, maad se
gabagabayn arinkaa waxana aad raadinaysay goob kale oo xaafada ah, maxaa yeelay
waxa aad is lahayd dhiska wayni waxa uu si fudud kaaga iibsami karaa haddii aad
dhiskan yar raaciso (iibka).45DSHISKA Biriishyada
Ta n i m a a h a h a n t i d i i u g u h o r a y s a y e e a a d i i b i s o x a a f a d a n . L a b a h a n t i y o o d o o h o r e o o
aad iibisay oo aad oglaatay qayb yar oo lacagta guud ah in aad dib u dhigto oo bishiiba
waxoogaa, mudo gudaheed, lagu siiyo, labada xaaladoodba dadkii iibsaday guryuhu dib
ayay uga dhaceen bixintii, waqti badana waxa kaa qaatay sidii aad lacagtaadii u soo
ceshan lahayd, xaaskaagana waqti aan fogayn waxa aad u sheegtay, “waligay iibin
maayo goob kale ilaa lacagteeda aan dhammaan markiiba ka wada qaato mooyee,
maxaa yeelay dhakafaar uma taag hayo”. Waxa aad filaysaa in xarunta xanaanadu ay u
geysatay xaafada wax qiimo badan, diyaarse uma tihid wax kasta si xarunta halkan
loogu hayo, waxana kaa go’an in aad hantidaada siiso lacagtii aad bilawgii codsatay.LIISKII BAADHITAANKA EE GOOBJOOGAYAASHA.
1- Dhinac kasta ma caddeeyay waxa uu ka rabo gorgortanka.
2- Waa maxay nuqdadaha u adag ee maslaxaad u baahani marka la
3- Maku jirtaa gorgortanka nuqdad tusaysa in dhinac kasta u soo dhaqaaqay in
si wadaag ah mushkiladii loo xaliyo? Haday jirto, waa tee?
4- Labada dhinacba danahoodii ma la fuliyay markii la dooday? Bal sharax
heshiiskii ugu danbeeyay.
………46DSHISKA BiriishyadaQALABKA 11:
IYO KUWA KUU GAAR AH OO AAD
Ujeedooyinka w axbarashada:
1-In aad fahamto marka aad isticmaalayso dhexdhaxaadinta iyo marka
aanad isticmaalayn, si iskudhaca loo gudogalo oo xal loogu raadiyo.2-Si aad u hesho karti aad ku qorshayso geedi socodyo dhexdhaxaadineed
oo ku haboon xalinta isku dhacyada gooba qoomiyadeed ama dhaqan oo
gaar ah.Waqtiga loo baahanyahay: 120 daqiiqadood
Kaydka loo baahan yaha y: qoraaladii sida ku xusan tilmaamaha buuga
koowaad ee buugaagtan
1-2-Soo bandhig layliga adiga oo sharaxaya taariikhda dheer ee dhexdhaxaadinta,
iyo dhaqanada badan ee lagu isticmaalo iyada oo laga dhiganayo qalab lagu
xaliyo isku dhacyada (eeg cutubka 6 ee “akhiryaha” si, ra’yiga looga qaato). Ku
liis garee dhawr sharax oo dhexdhaxaadinta ku saabsan waraaqaha
balballaadhan ee laalaabma. Waxana aad waydiisaa ka qaybgalayaasha in ay
akhriyaan oo ay ka doodaan arimaha sharaxyada dhexda u ah ee ay ka
simanyihiin. Wad dooda adoo waydiinaya sida dhexdhaxaadintu uga duwan
tahay gorgortanka, xaga geedi socodka lagu xalinayo isku dhaca.
Ku ururi waraaq caadi ah liis isku jira oo aan waxba loo eegin oo tusaya
xaaladaha dhexdhexaandinta ka dhiga istaraataji wax lagu guda galo oo haboon
ama aan haboonayn si loo xaliyo khilaafaadkii. Eeg boga uugu dambeeya
layliga ee liis garaynaya xaaladaha haboon ama aan haboonayn.47DSHISKA Biriishyada3-U qaybi ka qaybgalayaasha laba kooxood oo is leeg. Waydii koox kasta in ay dib
u eegaan liiskii kana doortaan xaaladaha ay dareemayaan in ay ku haboon
yihiin dhexdhexaadin iyo xalaadaha aan ku haboonayn, iyaga oo sharax koobanka bixinaya doorashadooda ku saabsan xaalad kasta kuna qoraya arinkaa waraaqaha
balballaadhan. Sii (30) daqiiqo si hawsha loo dhammaystiro.
4-Sodan daqiiqo ka dib, waa in kooxihii dib u kulmaan oo keenaan liisaskoodii.
Marka labadii liisba la sameeyo, ka dood meelaha ay isku dhaafsanyihiin adoo
eegaaya sida ay xaaladaha u kala horaysiiyeen, Bal jawaabahooda barbardhig
liiska bogga kan xiga ku yaal.5-Adoo u diyaar garoobaya wajiga ugu danbeeya ee layliga, waxa aad siisaa ka
qaybgalayaasha sadex tusaale oo dhexdhaxaadinta ah oo daabacan waa kuwa
ku sharaxan cutubka 6 qaybta 1, ee buugaWaa tusaalihii Raider-Coleman, iyo geedi socodkii dhexdhaxaadinta (asxaabta)
iyo habkii Christopher Moore.Waxana aad tidhaa akhriya sadexdaa sharax,
markaa u qaybi ka qaybgalayaasha kooxo yar yar oo ka kooban afar ilaa shan
ka qaybgalayaasha ah. Koox kasta haka doodo tusaalayaashaa sadexda ihi
meelaha ay iska shabahaan iyo meelaha ay ku kala duwan yihiin, markaa iyada
oo la cuskanaya doodahooda, waxa aad diyaarinaysaa geedi socod
dhexdhaxaadineed oo ay dareemayaan in uu aad ugu haboon yahay in
dalkooda ama goobtooda lagu isticmaalo. Waa in koox kastaa ay waraaq caadi
ah ku murtiyeeyaan wajiga ay wax u arkaan, si loo riboodhgareeyo oo looga
doodo. Sii kooxaha ilaa (60) daqiiqo si hawsha ay u dhammaystiraan.
6- Dib u kulmi kooxaha si ay u bandhigaan riboodhadoodii. Waydii koox
dhexdhexaadineed. Ku dhiiri kooxaha doodo ku saabsan meelaha layska
shabaho iyo meelaha lagu kala duwan yahay.
7- Ku xidh fadhiga dood ku saabsan sida loogu isticmaalayo habkan khilaaf
xalinta bulshadooda iyo goobta shaqadooda. Waxa kale oo aad waydiin
kartaa in ay rumaysan yihiin in wajigan khilaaf xalintu caan ka noqondoono
bulshadooda gudaheeda. Haddii arinku sidaa yahay waxa isweydiisaan sidee
ayaa si tayo leh loogu isticmaali karaa?48DSHISKA BiriishyadaXaaladaha Ka Dhigaya Dhexdhaxaadinta
¾Caadifad xoog leh ayaa saamaysay go’aankoodii.
Dhinacyada oo is garanaya.
Ma jiro faraq wayn oo u dhaxeeya xaga xidhiidhka awooda ee dhinacyada.
Dadkan isku dhacay way wada nool yihiin, way wada shaqeeyaan, ama waxa
jira sabab kale oo aanay ku kala fogaanayn.
Dhinac ayaan ku niyad samayn in uu hor fadhiisto dhinaca kale iyada oo aan
cid sadexaad la joogin.
Dadka arinku khuseeyo ayaa raba in natiijadu gacantooda ku jirto.
In xidhiidhka la ilaaliyo ayaa muhiim ah.
Qolooyinka isku dhacay ayaa dareemaya in ay u baahan yihiin xirfadaha iyo
taageerada dhinac sadexaad oo khilaafkooda ka shaqeeya.
Waxa loo baahan yahay go’aan dag-dag ah.
Sirta ayaa muhiim ah.
Dad badan ayuu arinku khuseeyaa, sida khilaafka xaafadaha.
Dhinacyada ayaa raba in ay ka fogaadaan geedi socod rasmi ah oo kharash
badan oo dawladeed sida maxkamadaha.Xaaladaha Ka Dhigaaya Dhexdhaxaadinta Mid Aan Haboonayn.
¾Waxa jira wax xoog u tusaaya in dhinac uu rabo in uu u isticmaalo
dhexdhaxaadinta si uu u sii huriyo iskudhaca ama u isticmaalo si uu u fuliyo
arin uu hoosta ka wado, sida hadidaado, iyo xog ururin lays leeyahay mar
dambe aad isticmaashid, qofka oo u eeg in aanu iskaashi diyaar u ahayn
Dhinac ayaa doodihii bilawga ahaa yimid isaga oo aan karayn dhagaysiga
dadka kale, ama ah mid aad u wareersan, hadii la gaadhi lahaa heshiis
Wax aad u xun ayaa isla markaa dhacay oo ka joojinaya dhinac ama labada
dhinacba in ay si fiican uuga qayb qaataan.
Xaga awooda oo aan isu dheelitirnayn, tan oo fogaynaysa in la gaadho
go’aan loo dhan yahay .
Dhinac, ama labada dhinacba oo ay u fiican tahay in meel kale ay tagaan
Arinka u muhiimsan ee laysku hayo oo aan lagu xalin karin dhexdhexaadin.
Dhinacyada ugu mihiimsan ayaan diyaar u ahayn in ay geedi socodka ka
qayb qaataan.49DSHISKA Biriishyada他Dhinacna (labadaba) diyaar uma aha in uu eego xal khilaafaadkooda ku
saabsan.他Goob kale ayaa aad ugu haboon in iskudhacooda lagula tacaalo, sida :
sharcigii oo la jabiyay.
Ma jiro wax ballan qaadaya in heshiiskaas la fulinayo.他50DSHISKA BiriishyadaQALABKA 12:
MAARAYNTA ISKU DHACA IYO
Qalabka soo socda waxa loo qorsheeyay in uu caawiyo dhexdhaxaadiyayaasha iyo
gorgortamayaasha si ay u qiimeeyaan ilaha awooda ee kala duwan ee dadka,
kooxaha iyo ururada ay siinayaan adeega. Xaaladaha dadka oo aan sinnayn, sida
shaqadooda, kaydkooda dhaqaale, iyo goobaha awooda ee la filayo ee kale, waxa
weeye had iyo jeer qaar lagu gorgortamo oo miiska yaala, dadku ha muujiyaan ama
yaanay muujin eh. Waxana ay ku yeelanayaan saamayn wayn geedi socodka iyo
natiijooyinkaba. Waxana wanaagsan in la qiro jiraalkooda loona diyaar garoobo,
halkii laga soo qaadi lahaa in ay si uun u tagi ama aanay muhiim ahayn.
Marka waxoogaa, hag-hagaajina lagu daro geedi socodka hoos ku sharaxan, waxa
qalabkani noqon karaa layli wacyigalin iyo aqoon iswaydaarsi oo xoojinaya aqoonta.
Haddii hab tababareed loo isticmaalo, ka fikir in fadhiga lagu bilaabo dood la hagayo
oo ku saabsan qalab wax lagu qeexayo oo waydiimaha ka horreeya.Ujeedada waxbarashada: in la qiimeeyo ilaha kala duwan ee awooda ee ay
leeyihiin dhinacyada ka qaybgalayaasha ee loo qorsheeyay in ay ka
qaybqaataan geedi socodyada gorgortanka ama dhexdhexaandinta Waqtiga
l oo baahan yah a y: 90- 120 da qiiq adood.
Ka ydk a l oo baaha n yah a y: waydi im o is qiim ayn ah
K h a r i i r a d a f i k r a d e e d e e i l a h a a w o o d a : French iyo Raven1 waxa ay
tilmaameen darajooyin kala duwan oo awood ah oo ay muhiim tahay in la
ogaado iyada oo laga dhuganayo dhinaca isku dhac iyo khilaaf maaraynta.
Waxa aynu ka soo qaadaynaa in ay jiraan laba dhinac oo kaliya oo isku dhac
ama khilaaf dhex yaal marka aynu sharaxayno ilahan awooda. Qaar badan
ayay noqonkaraan, markaa waa in mid kasta la qiimeeyaa iyada oo la eegayo
xidhiidhka uu ka kale la leeyahay laguna salaynayo xaaladaa gaarka ah. Ilaha
awoodu waxa weeye:51DSHISKA Biriishyadaoooo
oA w o o d i i a b a a l i n t a : waxana ay ku dhisantahay iyada oo dhinaca (B)
rumaysanyahay in dhinaca (A) uu xaaladaa isku dhaca bixinayo abaal guddalacsiin, gargaar, aqoonsi, ogolansho qalab iyo kayd kale.
A w o o d a q a s a b k a : waxa ay cuskanaysa ( B) oo dareemaya in (A) karti uu u
leeyahay in uu gaysto ciqaabo, xanuujin, canaan, hoos u dhig, dano uu
qofka ka xayuubiyo.
A w o o d s h a r c i : waxa ay cuskanaysaa qofka oo shaqo gaar ah haya, ama
xil ama xafiis urur ama bulsho. Xilkaasi waxa uu qofkaa siinayaa in uu
awood ku isticmaalo dadkii kale.
A w o o d l a c u s k a n a y o : waxa weeye qofka (B) oo aqoonsan in (A) uu yahay
dhinaca haysta wax siinaya ixtiraam, in la adeeco, lana raaco
A w o o d k h i b r a d e e d : waxa ay ka imanaysaa (B) oo rumaysan in (A) uu
leeyahay aqoon gaar ah, iyo xirfad ama khibrad.
Rav e n ( aas a as k a a wo o da buls h o) P. Car t wr ight ( ed) bar as h ad a a r r im aha buls had a
(Ann Arbor, jaamacadda Michigan 1959)1.oo
oA w o o d x o g e e d : waxa ay ku dhisantahy dhinaca (B) oo rumaysan in (A) uu
hayo xog ama heli karo xog geedi socodka natiijadiisa muhiim u ah.
lixdaa heer awood ee French iyo Raven sheegeen waxa aynu ku dari
karnaa laba kale oo inta badan soo mara xaaladaha khilaafka.
A w o o d a x i d h i i d h k a : waxa ay ku xidhantahay (B) oo rumaysan in (A)
xidhiidh la leeyahay dad muhiim ah ama wax raadayn kara.
A w o o d a ( i s b a d a l ) c a a w i y e : waxa ay ka dhalanaysaa kartida la iskugu
gaygayn karo laba ama in ka badan oo awoodo ah oo aanay awood kali ihi
iskeed ku filnayn in ay natiijo keento .Asaasyadaa awoodeed, sadex ka mid ah, abaalinta, qasabka, iyo awooda
sharci waxa ay diirada saaraan qofka awooda haya iyo kartidiisa uu ku badali
karo dhaqanka dhinaca kale, in kasta oo dhinacaasi uu is caabiyaayo. Afarta
nooc ee awoodeed ee soo hadhay, xogtii, cuskashada, khibrada, iyo xidhiidhku
inta badan waxa ay ka qaybqaataan guusha uu dhinac xaalad iskudhaca ku
guulaysanayo isaga oo cuskanaya dareenka dhinaca kale uu ka qabo inta ay
xoogan tahay ama jilicsantahay ilahaa awoodeed.
Maaraynta Xidhiidhada Aw ooda
Waxa laga yaabaa in ay muhiim tahay in laga fikiro raa’yiyo asaasi ah oo la xidhiidha
dabeecada awooda ee goobaha ay ka jiraan khilaafaad iyo isku dhacayo maarayn u
• Xidhiidhada awoodu waxa ay ku jiraan dhaqdhaqaaq, mana taagna, waxana ay la
kulmayaan dib u gorgortan joogta ah.
• Awood ma qnaanta dhinaca xidhiidha badan, ayaa ka faafi og awood isticmaalka.
• Awooda oo maqani waxa ay ka dhigaysaa dadka iyo alkumyadooda in ay u
cabanaadaan deegaamadooda.52DSHISKA Biriishyada
•Buuxinta iyo maaraynta awooda maqan ayaa ka wax ku oolsan maaraynta awooda
Kuwa aan awooda lahayn ee ururada iyo bulshooyinka ka mid ihi inta badan ma
aqoonsana xooga ay ku leeyihiin xidhiidhada awooda.
Geedi socodka daryeelka awooda waxa ku jira in ay si joogta ah isku baayacaan
dadka is leh awood ayaa haysataan iyo kuwa is leh ma haystaan.
Kuwa awooda badani waxa ay u baahan yihiin in awoodoodaasi ay u haystaan si
xaq ah oo ku jirta xidhiidh koobaya isticmaalkeedii, ilaalinaya xaqeedii.
Awooda u horaysa ee dadka aan awooda lahayni waxa weeye iyaga oo si habaysan
u isticmaala wax rumaysi la’aanta. Sida : in ay diidaan ogolaanshaha sharaxa uu
bixiyo qof awoodi ka danbaysaa,
Ilaha awoodaha al kumyadu way xayndaabanyihiin, xayndaabyadaasi dib ayaa loo
sharixi karaa. (Sharax cusub ayaa la siin karaa).
Awooda oo la wadaagaa la mid ma aha awooda oo la bixiyo (faraha laga qaado).
Dhexdhaxaadiyaha ama gorgortamaha libta soo hoynayaa ma fududaysto ilxuna
kuma eego kaalinta awoodu gaysan karto marka la maaraynayo hawl maalmeedka
isku dhacyada iyo khilaafaadka ku saabsan.QIIMAYNTA ILAHA AWOODA EE
XAALADAHA ISKU DHACA
Dhinac kasta oo ku jira xaalad iskudhac waxa uu leeyahay ila awoodeed oo
heerarkeedu ay kala duwan yihiin oo ka caawinaya in uu ama xaliyo iskudhacii
ama sii wado. Waydiimahan soo socda waxa loo qorsheeyay in ay qiimeeyaan
suurtagalka ay dhinacyada u mudan ee ka mid ah xaalad isku dhac ah oo gaar
ihi ay raadayn karaan natiijooyinka, isticmaalina karaan ilahaa awoodeed.
Waxa ku liis garaysan shaxda hoos ku sawiran dhinaceeda bidix todoba ilood
oo awoodi ku jirto. Midigtana waxa ku yaal laba tiir oo qiimaynaya in ilahaa
awoodeed ay noqon karaan arimo raadaynaya natiijooyinka xal kasta oo
gorgortan ama dhexdhexadin ku yimaad. Qalabkanina waxa uu malaystay in
hawshan iskudhac xalintu khusayso laba dhinac oo kaliya. Ku dar tiirar badan
hadii loo baahdo.
Waxa jira sadex doorasho oo qiimaynaya in ilahaa awoodeed noqon karaan
arimo raadaynaya natiijada xal kasta oo gorgortan ama dhexdhaxaadin ku
1= Arin raadeynaya ma aha; 2- Arin raadeeynaya ayuu noqon karaa; 3= waxa
la hubaa in uu yahay arin wax raadaynaya.53DSHISKA BiriishyadaWaxa aad goobo ku samaysaa tirada tiir kasta ku xusan ee matalaysa ta aad
xukun ahaan doori lahayd marka la eego inta ilahaa awoodeed noqon karaan
qaar raadaynaya natiijada gorgortanka ama dhexdhexaadinta xaaladan khilaaf.
Nooca awoodaDhinaca AAw oodii abaalinta: kartida wax lagu abaalin
karo, iyada oo la adeegasanayo arimo ay ka mid
yihiin, dalacsiin, gargaar, aqoonsi, in laguu
ogolaado xog ama kayd kale
Aw ooda qasabka: kartida ciqaabta iyada oo la
marayo: casilaad, eri, canaan, dana laga 1
Aw ooda sharci: in aad leedahay xaq sharci oo
aad ku isticmaali karto dadka kale.
Aw ood la cuskado: adoo fahamsan in aad
leedahay sifaad shakhsiyadeed oo kuu keenaya
ixtiraam, adeecid, raacid
Aw ood khibradeed: waxa uu leeyahay xirfad iyo
khibrad uu ku helo waxa uu rabo
Aw ood xogeed: xog ayuu hayaa ama heli karaa
taas oo xaaladan iyaga muhiim u ah.
Aw ood xidhiidh: waxa uu xidhiidh la leeyahay
dad wax raadayn kara ama muhiim ah oo caawin
2 3Dhinaca B1 2 3
1 2 32 31 2 32 31 2 32 31 2 32 31 2 354DSHISKA BiriishyadaDIYAARINTA I STARAATAJI AWOODEED
Iyada oo la eegayo qiimayntaa imika dhammaatay, sidee ayaad uuga
faaiidaysan kartaa adiga oo ah ama dhinac gorgortan ama dhexdhexaadin
galaya, ama ah dhinac sadexaad oo gorgortame ama dhexdhexaadiye ah?
Xaaladahaa mid kasta waxa aad u baahantahay in aad diyaariso
istaraatijigaaga inta aanu gorgortanka ama dhexdhexaadintu bilaabmin. Waxa
aad halkan ku arki tilmaamo ku saabsan talaabooyinka aad qaadayso si aad u
1. Liis garee dhammaan ilihii awoodeed ee lagu qiimeeyay (3) arin la hubo, iyo
(2) Arin la filayo, kana jawaab su’aalaha soo socda
Dhinaca A ______________________________
Arinkii______________________________Ma la isticmaalayaa ishan awoodeed si loo xaliyo iskudhaca ama khilaafka?
(haa:__________may___________) amase arinka sidaasi loo daayo?
(haa:__________may___________) maxaad sidaa ugu malaysay
Hadii aad tahay dhinaca A, waa maxay istaraajigaaga aad ku isticmaalayso
Hadii aad tahay dhinaca B, waa maxay istaraajigaaga aad kula tacaalayso
isticmaalka ishan awoodeed ee ka timid dhinaca kale ee isku dhaca?
(Samee foomam dheeraad ah si aad u diyaariso istaraatajigaaga)55DSHISKA BiriishyadaDhinaca B: ________________________
Arinkii :________________________Ishan awoodeed ma loo isticmaali karaa in lagu xaliyo iskudhacii ama
(haa: ___________may_____________) amase arinka sidiisaa loo daayo?(haa:____________may:____________) maxaad ugu maleysay in arinku sidaa
Hadii aad tahay dhinaca B, waa maxay istaraatajigaaga aad ku isticmaalayso
Hadii aad tahay dhinaca A, waa maxay istaraatajiga aad kula tacaalayso hadii
dhinaca kale ee iskudhacu isticmaalo ishan awoodeed?
(Samee foomam dheeraad ah si aad u diyaariso istaraatajigaaga)56DSHISKA BiriishyadaQALABKA 13:
Ujeedada w axbarashada: si loo helo xirfad tababar oo loogu diyaar garoobo
dhexdhexaadin lana dhexdhexaadiyo khilaaf ku saabsan dhis magaalo:
matalaad qaynuun fulin.
W aqt i ga loo baaha n yah a y: 180 daqi iq o.
Ka ydk a l oo baaha n yah a y: laba qor a al: m id xa alad ah, i yo m id t ilm aam aya
1. Ku bilaw layliga adoo u sheegaya ka qaybgalayaasha in ay galaan matalaad
laba qaybood ah. Xaalad, khilaaf ku saabsan ogolaansho dhis, tan oo
matalaadii noqonaysa. Waxa ay ku saabsan tahay khilaaf dhexyaal
saraakiisha magaalada iyo sharkad wax soo saarta (samaysa) oo loo diiday
ogolaansho dhis warshadeed iyada oo la leeyahay waxa ay khilaafsan tahay
qaynuunkii dhiska ee magaalada. Xaalada qoraalkeeda oo dhan waxa aad
ka heli sharaxa layligan gabagabadiisa ku yaal.
dhexdhaxaadiyayaashii iyo dhinacyadii mudnaa ee iskudhaca: madaxii
sharkada wax samaynaysa ee rabtay magaalada in wax ay ka dhisto,
ingineerkooda wayn, maayarka iyo sarkaalkii fulinayay sharciga deegaanka.
Ujeedada shirkani waxa weeye in la caawiyo ergada labada dhinacba sidii
ay u fahmi lahaayeen mabaadiida iyo geedi socodka dhexdhaxaadinta.
Marxaladan u horaysa waxa ay qaadanaysaa 45 daqiiqo.
3 . Sharax qaybta labaad ee mataalada in ay ka koobantahay laba wareeg oo
dhexdhaxaadina si loo siiyo ka qaybgalayaal badan khibrad toos ah oo lagu
qabto hawsha dhexdhaxaadinta. Mid kasta oo ka mid ah matalaada
dhexdhaxaadintu waxa ay qaadanaysaa 60- 90 daqiiqo.
4. U qaybi ka qaybgalayaasha laba kooxood, sii ka qaybgalayaasha koox
kasta sawir (nuqul) xaalada ku saabsan waxana aad waydiisaa inay
akhriyaan. Marka ay akhriga ay dhammeeyaan, qaado waxoogaa daqiiqado
ah si aad u goyso cida jilaysa kaalintii kooxda dhexdhedhexaadinta ee
labada qof ahayd iyo afarta dhinac ee roonroon ee iskudhaca inta lagu jiro
matalaada labada qaybood ah, marka goâ&#x20AC;&#x2122;aamadaa la sameeyo u sheeg
dadka koox kasta oo jilaysa kaalintii dhexdhaxaadiyaasha inay isticmaalaan57DSHISKA Biriishyadatusaalihii Raider iyo Coleman ee dhexdhaxaadinta ee lagu sharaxay
cutubka lix ee“akhriyaha”. Maskaxda loo isticmaalay tusaalahan waxa ay ka
soo jeedaa sahlanida marka labada (tusaale) ee kale loo eego, waxa aad u
sheegtaa ka qaybgalayaasha koox kasta oo aan jilayn kaalmo, bal inay
qaataan (kaalinta) goobjoogayaasha. Mid kasta oo ka mid ah
goobjoogayaasha sii tilmaamihii goobjoogaha inta kooxdoodii dhab ahaan
ay ku jiraan matalaadii.
5 . Waydii labada kooxood inay ku kulmaan laba goobood oo kala gooni ah. U
sheeg koox kasta oo ka qayb galayaasha dhinac kasta oo khilaafka ah ka
tirsan iyo kooxaha dhexdhexaadintaba inay goonidooda u shiraan si shirka
loogu diyaar garoobo. Bal eeg marxalada is diyaarinta ee tusaalaha Raider
iyo Coleman. (15) Daqiiqo kadib u sheeg ka qayb galayaasha koox kasta
inay dhammays tiraan shirkii is diyaarinta iyaga oo u diyaar garoobaya
matalaadii dhexdhaxaadinta soo socota.
6 . Inta labada kooxood shirayaan si ay ugu diyaar garoobaan fadhigii is
diyaarinta, waydii goobjoogayaasha koox kasta in ay caawiyaan diyaarinta
iyo qalabaynta qolka tababarka si dhexdhexaadinta si haboon loogu
habeeyo. Eeg marxalada 1 aad Furitaanka dhexdhaxaadinta ee tusaalihii
Raider iyo Coleman. Marka ka qaybgalayaashii labadaa kooxood diyaar
garoobaan bilaw qaybtii labaad ee matalaada, adiga oo waydiinaya xubnihii
kooxda koowaad inay fadhiistaan miiska loo diyaariyay matalaada
dhexdhaxaadinta. Iyaga oo goobjoogayaashii iyo xubnihii kooxda labaad
fadhiya wareega (hareeraha) miiska dhexdhaxaadinta, bilaw matalaadii. 60
ilaa 90 daqiiqo kadib, marxalada dhexdhaxaadintu marka ay dhammaato,
gabagabee matalaadii. Dhawr daqiiqo ka dib, iyaga oo xubnihii kooxda
labaad fadhiya miiska, bilaw wareegii labaad ee dhexdhaxaadinta imika,
iyaga oo goobjoogayaashii iyo xubnihii kooxda hore fadhiyaan wareega
(hareeraha) miiska dhexdhaxaadinta.
7. Marka la dhammeeyo wareega labaad ee dhexdhaxaadinta, war celin weydii
goobjoogayaasha, ka qaybgalayaasha labada kooxoodna ha galaan dood
Fiiro ugaar ah tababaraha: layligan matalaada ah waxa loo badali karaa siyaabo badan si uu
ugu haboonaado baahiyaha ka qaybgalayaasha tababarka. Tan waxa ay noqon kartaa in sikale
loo qoro iyada oo la milicsanayo xaalad ay ka qaybgalayaashu aad u garanayaan, iyada oo la
badalayo kaalmaha la fulinayo ee geedi socodka dhexdhaxaadinta ama la isticmaalayo tusaale
dhexdhaxaadin ah oo duwan, ujeedadu se waa isku mid uun. Waxa weeye in ka
qaybgalayaasha lagu caawiyo geedi socodka dhexdhexaadinta oo ay helaan xirfad
dhexdhaxaadineed.58DSHISKA BiriishyadaXAALAD BAADHIS : KHILAAF KU SAABSAN OGOLAANSHO DHIS:
Sarkaalkii hirgalinta qaynuunka deegaanka ee magaalada ayaa isla markaasi diiday
inuu ogolaado in laga dhiso warshad cusub oo wax soo saaraysa magaalada
xuduudeeda. Diidmaduna waxa ay cuskanaysaa farsamo khusaysa waxyaalo
warshadu hawada ku sii daynayso oo neef aan la ogolayn ah oo dhaafsan boqolkiiba
shantii amarka dowlada hoose ogolaa. Qaynuunk an neefta sii daynteeda la ogol
yahayna waxa qaatay gole hore oo la doortay. Sarkaalkanina wuu hagaagsan yahay
sida uu qaanuunka u arko xaqna waxa uu u leeyahay in uu diido ogolaanshaha
dhiskaa. Waxana sarkaalku uu taageero ka haystaa koox yar oo urur deegaan ah,
hase yeeshee cod dheer, oo xafiisyo ku leh magaalada. Waxana ay kooxdaa
deegaanku u sheegeen sarkaalka si aan rasmi ahayn inay diyaar u yihiin in ay
talaabo sharci ah la tiigsanayaan magaalada hadii ama madaxada sarkaalka oo ah
maayarka ama golaha magaaladu diidaan go’aanka sarkaalkaa.
Maayarkuna waxa uu ku hawlan yahay in markale la soo doorto waxana uu kaambayn
u galay in uu kordhiyo fursadaha shaqooyinka magaalada gudaheeda. Warshada
cusub ee wax soo saaraysaana waxa ay abuuraysaa 250 shaqo oo cusub oo aad
magaalada iyo gobolkuba uugu baahan yahay. waxaana lagu yaqaanaa in uu nidar
ugalay inuu taageero shaqaalihiisa, gaar ahaan marka go’aanadoodu ay ku dhisan
yihiin xukun iyo xeer macquul ah.
Ta kale maayarku waxa uu helay taageerada ururkaa deegaameed iyo xubnah a
ururkaa markii uu isu soo sharaxay sadex sano ka hor xafiiska, waxana lagu
yaqaanaa aragtiyihiisa xooga badan ee ilaalinta deegaanka. Maayarkii ayaa isla
markaa ku dhawaaqay in uu taageerayo go’aankii sarkaalka hirgelinta qaynuunka
inkasta oo taasi ay wax yeelayso awooda dhaqaale ee magaalada sida imika
Markii ay maqleen go’aanka maayarka ayaa rugtii ganacsigu ay qabatay shir jaraa’id
oo ay si kulul u weerartay maayarku go’aankaa uu qaatay, iyaga oo isla markaa
sheegaya in rugtuba ay doonayso ilaalinta deeganka. Ururka deegaankuna waxa
weeye mid ka mid ah xubnaha ka tirsan rugta ganacsiga ee aadka u firfircoon. Af
hayeen ka tirsan warshadii wax samaynaysay ayaa joogay shirkii jaraa’id waxana uu
halkaa ka sheegay in shirkadu diyaar u tahay in ay meel kale raadsato haddii aan
“shaqadan foosha xun” aan xal laga gaadhin. AF hayeenka warshadu waxa uu ka mid
ahaa shaqaalaha hirgalinta xeerka mar hore, waase laga maarmay markii uu aad u
jajabnaaday xaga hirgelinta xeerarka.
Hadaba intiii aan shirka jaraa’id dhammaan ayaa madaxii hore ee rugta oo ah qareen
aad magaalada looga ixtiraamo, ayaa soo jeediyay inay fiicantahay in loo yeedho
koox dhex ah oo dhexdhaxaadiyayaal ah oo ka socda magaalo kale si ay u eegaan
arinkan bal inay iskudhaca xaliyaan. hadalkiisa waxa uu ku qiray in labada dhinacba
xaq u leeyihiin in ay arinka geeyaan maxkamadaha si loo kala xukumo, waxa se uu
sheegay in uu ra’yi ka qabo sidaasi. Waanu sii waday hadalka isaga oo saadaalinaya
“waxa laga yaabaa in ay bilo qaadato in go’aan la gaadho, labada dhinacbana lacag
badani kaga baxdo kharashka sharciga, bulshadana kala jabiso oo bogsigeedu
sanado qaato”59DSHISKA Biriishyada
Markii uu maayarkii ka akhriyay shirkii jaraa’id, tan oo ku soo baxday jaraa’idkii
maalintii labaad, waxa uu la xidhiidhay saaxiibkii oo ahaa madaxii hore ee rugta
ganacsiga, bal in uu war badan ka bixiyo sidii uu isku dhaca ugu gudbin lahaa
dhexdhaxaadin. Gorfayntii ka dib maayarkii ayaa la hadlay madixii shirkada
qorshaynaysay in ay ka dhisto warshada cusub ee wax soo saaraysa magaaladiisa.
Markii ay wada hadal dheer yeesheen, ayay ku heshiiyeen in ay la xidhiidhaan
adeeg dhexdhexaadineed oo caan ah si shir loo qabto.Tilmaamihii Dhexdhexaadinta ee Goobjoogaha
1 Guud ahaan, ma u eegtahay bilawga dhexdhexaadinta in labada dhinacba si
fiican u diyaar garoobeen, sida: in ay u muuqdaan in ay rabaan galitaanka
dhexdhexaadinta, in ay u eegyihiin in ay fahamsanyihiin geedi socodka
dhexdhexaadinta, in ay u eegyihiin in ay ku kalsoonyihiin dhexdhexaadiyaha.
Bal kan u eeg shirkii ka horreeyay ee gogol xaadhka ahaa?.
in uu u qabanayo
2 Sideed u qiimaynaysaa adeega dhexdhexaadiyaha
3 Markii lagu jiray marxalada labaad: ee la qeexayay arimaha, ka waran
tayada dhexdhexaadiyaha markii uu tusaalaha ka bixinayay dhaqanada ay
soo bandhigayaan dhinacyadu. Sida: dhagaysi fiican, su’aalo fiicfiican, soo
koobida nuqdadaha ay sheegeen dhinacyadu, tilmaamida meelaha lagu
………60DSHISKA Biriishyada4 Si fiican ma u caawiyay dhexdhexaadiyuhu ka qaybgalayaasha in dhinacba
dhinaca kale uu dareenkiisa arinka ku saabsan fahmo, markii lagu jiray
marxalada sadexaad: in xal la helo iyada oo lagu caawinayo dhinacyada in ay
caddeeyaan malahooda oo ay curiyaan xalal la kala dooran karo?
5 Dhexdhexaadiyaha tayadiisa ka waran markii marxalada afraad lagu jiray:
xidhitaanka dhexdhexaadinta, iyada oo lagu caawinayo in la jaribo xalkii lagu
heshiiyay, oo laga qaado ballan (damaano) In dhinacyadu ay diyaar u yihiin
fulinta waajibka laga rabo ee ay isku leeyihiin dhinacyadu sida heshiisku
………61DSHISKA BiriishyadaQALABKA 14:
SAWIRADA WADA HADALKA.La taliye
SafarKani waxa uu noqon karaa layli fiican oo aad ku gabagabayso aqoon iswaydaarsigaagii. Geedi
socodka aanu ku murtiyeynay tilmaamaha soo socda waxa loo qaybiyay si waafaqsan mid lagu
xusay buug cusub oo ku saabsan isticmaalka wada hadalka .( eeg raad raaca si aad sharax
dheeraad ah buuga uuga hesho). Layliga oo la badalay ayaa lagu isticmaalay dhammaadkii
aqoon iswaydaarsi goboleed lagu qabtay Romania halkaa oo qalabkan lagu sameeyay tijaabo
goobeed. Tijaabo goobeedkaa, ka qaybgala kasta waxa la siiyay waraaq cad iyo in uu qaadan
karo tiro badan oo qalimo badan oo wax lagu calaamadiyo ah waxaana lagu yidhi bal adigu isku
sawir gudaha iskudhacaa. Markii fikradahaa loo muujiyay qaab farshaxan ah, qof kasta waxa lagu
amray in uu sawirka u gudbiyo dadka kale si ay wax uugu dari karaan sawirka. Waxana laga
codsaday ka qaybgalayaashii in ay u shaqeeyaan iyaga oo ah kooxo yar yar oo 6 ilaa 8 ah ,
markaa kaqaybgalyaasha aqoon iswaydaarisgaagana, haddii aad goosato in aad samayso wax
sidan oo kale ah , waxa loo baahan karaa dhexgalo la sameeyo iyo kooxo kuwan ka duwan.
Layligan iyo kuwa kaleba waxa fiican in ay waxyaalaha aad kala dooranysaan ay noqdaan qaar
Gabagabadii iskudayada kooxahaa, sawirada waxa la dhigay dhulka si ay u dhaliyaan koox la isu
geegeeyay. qof kasta waxa uu ka hadlay sawirkiisii iyo micnihii uu is lahaa, gaar ahaan marka uu
eego waxyaalaha asxaabtiisu ku soo kordhiyeen.
Kani hubaal waxa weeye qalab la badali karo si uu uugu haboonaado danaha iyo dareemada ka
qaybgalayaasha iyo tababarayaasha. Ha ka biqin in aad tijaabiso si aad u caawiso ka
qaybgalyaashu in ay sawiraan dareenkooda hoose ee ku saabsan khibradahooda aqoon
iswaydaarsigan iyo guud ahaan fikradahooda ku saabsan isku dhacaba. Qalabka 15 naad, ee ku
xiga kan, waxa isna uu ku saabsan yahay geedi socodka lagu curinayo wadahadalada waxa aad
u baahantahay in aad baadho isaga iyo waliba sida aad uugu soo bandhigayso ka
qaybgalayaasha aqoon iswaydaarsiga qalabkan muhiimka ah ee ku saabsan iskudhac
Imika halkan waxa aad ku arki qorshihii aasaasiga ahaa si aad u eegto
Ujeedada w axbarashada : in la kordhiyo aqoonta iyo xirfada lagu dhalinayo wada
hadal wax soo saar leh.
Waqtiga loo baahanyahay: 30 daqiiqo
Ka ydk a l oo baaha n yah a y :
o In ka qaybgale kasta haysto warqad cad oo adag. Oo waraaqaha (A-4)ka
laban laabkood ah ama ugu yaraan 18 x 24 inch.62DSHISKA Biriishyadao Midabo biyood fara badan, Qalimo midabo ah oo wax calaamadiya, rinji
biyaha ku milmaya, iyo wax kasta oo aad kan kaga dhigi karto “khibrad
o Marka aad qaadatay qalabkaagii aad dooratay ee aad wax ku curinaysay,
waxa aad u baahan kartaa, burush rinji, koobab biyo ah, iyo wixii la mid ah.
o Saacad gacantii il bidhiqsiyada leh, iyo
o Jalas nooc uun ah. Waxa uu noqon karaa mid fudud sida koob quraarad ah
iyo malqaacad oo aad ka amaanaysatay madbakha goobtaasi.
1) Hadii aad la shaqaynayso koox uu haysto iskudhac ama mushkiladi ay waajahday
taas oo jiitamaysay wiigag ama bilo, ku isticmaal layligan mushkiladaasi adoo iyada
bar tilamaameed ka dhiganaya. Waxana aad badal ahaan ka doontaa kooxda in ay
doortaan arin isku dhac ah oo imika waajahaya. Marka la isticmaalo mushkilad ay
iyagu garanayaan waxa ay caawinaysaa kooxda sidii ay aragtiyo iyo dareemo
cusub uuga qaadan la haayeen xalinteeda.
2 ) Waxa aad siisaa ka qaybgale kasta gobal warqad adag ah iyo qalabkii sawirka ee
kor lagu xusay. Ha fadhiistaan ka qaybgalayaashu miisas ballaadhan oo 6 ilaa 8
qof qaadaya oo si raaxo ah ay ugu shaqayn karaan, samee kooxo badan haddii loo
baahdo, ku qor mawduuca ay kooxdu goosteen in ay ka shaqeeyaan waraaqaha
balbalaadhan ee laablaabmaya waxana aad sharaxdaa geedi socodkii iyaga oo ka
3) Fudeydiyeyaashii ayaa bilaabaya geedi socodka iyada oo ka qaybgalayaashii ay si
dagan u fadhiisanayaan oo daqiiqad ama laba aamusayaan, waa fursad diirada la
saarayo arinkii si maskaxda qofka iyo dareenkiisa hoose uu sawirku ugu dago.
4) Daqiiqad ama laba kadib, fudeydiyihii ayaa garaacaya jalaska, isaga oo bilaabaya
kii u horeeyay ee wareegyada daqiiqada kaliya ah. Wareeg kasta, waa in qofkii ku
gudbiyaa warqadii la siiyay sawir ku saabsan arinka.
5) Hal daqiiqo ka dib, fudeydiyihii ayaa jalaska garaacaya, qof kastaana waxa uu u
dhiibayaa warqadii uu ku xusay sawirka uu arinka ka qabo qofka dhinaca midig ka
6) Marka qof kasta helo sawiro arigtiyeed oo cusub naftiisa ha u sheego “maxaa lagu
dari karaa si arinka loo sii caddeeyo” markaa sawirkiisa cusub ha ku kordhiyo
warqada. Waxa uu soconayaa wareegaa halka daqiiqa ihi ilaa qof kasta oo miiska
fadhiya ay soo gaadhayso warqadii uu ku bilaabay.63DSHISKA Biriishyada7)Nuqdadan
qaybgalayaasha in ay wadaagaan waraaqaha miiskooda yaala, oo ku dhajinayaan
gidaarka si looga doodo, ama waxa ay qaadayaan talaaba kasta oo loo arko in
dooda kooxdu ku haboon tahay. Fudaydiyuhu waxa uu ku dhiirinayaa koox kastain ay baadhaan xogta magac u yaalka ah ee ay gaadhaan (abuuraan) si ay
arinka si qoto dheer ugu fahmaan.
8)Fudaydiyuhu waxa uu keeni karaa su’aalo ama weedho kuwa soo socda oo
kale ah si uu uuga caawiyo kooxda geedi socodka xogta iyo fikradaha lagu
o Maxaad aragtaa?
o Sawiradu hakula hadlaan.
o Maka soo baxeen mawduucyo iyo fikrado dhex ihi farshaxankii si loo
dhanyahay loo sameeyay?
o Ma jiraan faraqyo muuqdaa? Haddii ay jiraan maxaad u malaynaysaa
o Dhageyso wixii la curiyay isna dhagaysta.
o Jooji waxa aad gaadho ee xukun a h .
[Layligan la badalay waxa laga soo qaatay hawl la fulinayay oo ku timid buug
wadahadal: dib u helitaanka awooda wax badalka ee wada
hadalka, oo ay qortay Linda Ellinor iyo Glenna Gerard. Waxa daabacay 1998
kii John Wiley iyo caruurtiisii “hawshaa la fulinaayo” ee aynu xiganay waxa ay
ku timid boga130 - 2 hadii aad rabto in wax badan aad ka ogaato (barato)
geedi socodka wada hadalka si kal iyo laab ah ayaanu buugaa kuugu
dardaaraynaa].64DSHISKA BiriishyadaQALABKA 15:
BARASHADA FARSHAXANKA FIICAN
EE WADA HADALKA
Ujeedada w axbarashada: si loo kordhiyo fahamka iyo xirfada isticmaalka
siyalaha lagu qeexo wada hadalka.
W aqt i ga loo baaha n yah a y: 90 ilaa 12 0 daqii qo.
Ka ydk a l oo baaha n yah a y:
1. Ushii hadalka: usha hadalku waxa weeye fikrad bulshada maraykanka ka
soo jeeda. Golayaashu marka ay shirayaan waxa loo dhiibaa ushaa,
hoggaanka iyo kolba qofka hoggaanka haya si ay u tilmaamto qofka goobta
haysta, ama loo ogolaaday in uu qaato fursada hadalka. Waxana weeye
calaamad ixtiraam, oo diirada saaraysa qofka haysta usha hadalka.
faa’iidadeeda u muhiimsana waxa weeye in ay joojinayso hadal is dhaaf
dhaafka oo gaabinayso xawligii wada hadalka.
2. W a ydi i m o qi i m a yn ah : w a ydiim aha qiim aynt a wa xa loo qor sheey ay in ay
bixiyaan war celin ku saabsan xirfadaha hore u marinaya wada hadalka
tayada leh. Waxa weheliya oo aad heli inta aan layliga wada hadalku
bilaabmin nuskhad (nuqul) ku saabsan su’aalaha la soo jeedinaayo iyo
qoraalo tusaya dooda la hagayo.
1.Ku bilaw khibradan waxbarasho dood la hagayo oo ku saabsan xirfadaha iyo
dhaqanada ku jira qabashada wada hadalka. Eeg qoraalada tababaraha ee la
socda sharaxa geedi socodkan tababarka ah ee la soo jeediyay.
2. U qaybi ka qaybgalayaashii kooxo yar yar oo sideed ilaa toban ka qaybgale ka
kooban waxana aad waydiisaa in laba ay qabtaan kaalinta goobjoogayaasha. U
soo koob kaalinta laga rabo.
o Kuwa ka qaybqaadanaya wada hadalka ayaa dooranaya mawduuc ay rumaysan
yihiin inuu matalayo aragtiyo soo kala horjeeda oo kooxdu qabato. Tusaale
ahaan, xag siyaasadeed, ama xaalad muran dhalinaysa oo bulshada dhexdeeda
imika ka taagan, xaga dalka ama gobol. Soo jeedi in la isticmaalo “usha hadalka”
si ay u caawiso maaraynta geedi socodka hadalka. Waxa aad xusuusisaa in
aanay tani ahayn dood la fududeeyay.65DSHISKA Biriishyada
o Goobjoogayaashu waa in ay kormeeraan wadahadalka diyaarna u noqdaan in ay
kala doodaan kooxda dareenkooda ku saabsan wada hadalka, waana in ay si
gaar a h u e e g a a n i n x u b n a h a k o o x d u r a a c e e n a m a a a n a y r a a c i n tilmaamihii
la soo jeediyay ee la murtiyeeyay intii lagu jiray doodii la hagayay.
3. U sheeg koox kasta in ay helaan goob dagan, markaa ay qabtaan dood ku
saabsan mawduuca ay doorteen. Ha qaataan ilaa 60 daqiiqo.
4. Gabagabada wadahadalka, goobjoogayaashu waxa ay waydiin doonaan in ay
buuxiyaan waydiimo gaaban oo ku saabsan khibradii dooda, marka ay
dhammeeyaan waxa ay qaban dood gaaban oo ah xog raadin.
goobjoogayaashuna waxa ay iyana ka warami dareenkooda gaarka ah ee nooca
wada hadalka xiligan.
5. Shan iyo toban daqiiqo in ku dhow ka dib marka ay kooxaha yaryari doodaan,
waydii kooxdii dhammayd in ay dib u kulmaan si loo qabto doodii u dambeysay
ee ku saabsanayd wixii ay soo barteen. Buuxi layligii adoo waydiinaya ka
qaybgalayaashii sida ay u isticmaalayaan wajigan si ay u caawiyaan dadka
iskudhacu dhex yaal in ay si fiican u fahmaan waxa ay isku khilaafsan yihiinFiiro gaar ah tababaraha :
Fikradaha iyo istaraatiijiyooyinka la xidhiidha geedi socodka wadahadalku waa fursado
muhiim ah oo lagu fududaynayo isku dhacyadii dabada dheeraa ee dhexyaalay
buslshooyinka . Marka aanu tilmaanay ahmiyada kaalinta ah in la bilaabo dooda dhab ah oo
bulshada dhexdeeda ah, waxa aanu dareemaynaa in la gaabiyay haddii aan la bixin ugu
yaraan mid waxbarasho fulin ah, taasi oo siinaysa fursad lagu caawinayo dadka kale in ay
kordhiyaan xirfadaha wadahadalka.
Iyada oo aanu jirin sharax cad oo wadahadalka ku saabsani, fikradahan soo socdaa waxa
ay caawinayaan sidii loo heli lahaa waxoogaa caddayn ah oo geedi socodka (wadahadalka)
ku saabsan iyo balbalaadhintiisa. Waxay inagu siinayaan Linda Ellinor iyo Glenna Gerard
buugoodii fikradaha badnaa ee wadahadalka, nuqdado faaâ&#x20AC;&#x2122;iida leh oo laga doodi karo2.
Waxa ay kala saarayaan wadahadal iyo dood. Iyaga oo u eegaya arimo is shabaha hadana
Wadahadalku waa ururin iyo caddayn micne ka imanaya dhinacyo badan, halka doodu
tahay burburin arinkii dhammaa iyada oo laga dhigayo qaybo badan. Waxa wadahadlku uu
u jeedaa dhammaynta wadahadalkii socday iyada oo dhaqdhaqaaqa ka dambeeyaa yahay
in la barto lana fidiyo waxa laga ogyahay arin, ama aragtiyo dad badan laga abuuro
dareemo cusub. Dhinaca kale marka dhaqdhaqaaqii yahay in la helo hal xal ama ka ugu
fiican ee laga dooran karo dhawr arin. Waxa arinku u jeedaa gabagabaynta doodii. Halkan
waxa aad ku arki waxyaala kala soocaya oo ay u dhexaysiinayaan Ellinor iyo Gerard
wadahadlka iyo dooda/dooda rasmiga ah. Waxa aad u fiirsataa in ay ku soo dareen (dooda
rasmiga ah ) gabagabada doodan taxanaha ah.66DSHISKA BiriishyadaWadahadal :
oIyada oo si guud loo eegayo qaybaha.
Iyada oo la eego waxa qaybaha isku xidha
Wax waydiin si loo helo waxyaalaha la malaysanayo
In wax laga barto waydiimaha iyo muujinta .
In arima badan micno dhex ah lagala soo baxo.Dood i yo dood r as m i ah
oArinkii iyo mushkiladihii oo qaybo loo jajabiyo
In la eego waxa qaybaha kala soocaya.
In cudurdaar loo sameeyo lana daafaco fikradaha.
Gogol xaadh, iibin, sheegid.
Ku guulaysiga in micno kaliya lagu heshiiyoMarka aanu jirin cadaadis ku saabsan in la gaadho gabagabo ama xal, ka
qaybgalayaasha waxa u fudud in ay bixiyaan aragtiyo kala duwan iyaga oo aan u
baahan in ay cudurdaar sheegaan ku saabsan “hagaagsanida” weedhahooda.
Ujeedada wadahadlaku waxa weeye in qofba qofka kale wax ka korodhsado lana
dhiso micno la wadaago oo kulminaya dhammaan aragtiyihii.
Waxa ay u egtahay in uu jiro heshiis guud oo dhexyaal dadka ka shaqeeya
isticmaalka wadahadalka oo ku saabsan sifooyinka muhiimka ah ee sharaxa geedi
socodkan. Waxa ka mid ah:
o J o o j i n t a x u k u n g a a d h i s t a : tani waxa laga yaabaa in ay tahay xirfada uugu adag.
Ma aha in la diidayo xukun gaadhistii, waxa se weeye kartida lagu xakamayn
karo xukun gaadhistii, ha ahaado kaaga ama ka dadka kale eh, adoo ka eegaya
meel dhexdhexaad ah adoon cidina ay ku raadayn dareenkaaguna kicin.
3. Ellinor, Linda iyo Gerard, dib u helitaanka awooda wax badalka ee wada hadalka, (waxa
New York ku daabacay 1998kii John Wiley iyo caruurtiisa) pp.201.Iyada oo laga tagayo filashadii in natiijooyin go’an la gaadho: wada hadlaku ma aha
in mushkilad la xaliyo. Waxa se weeye geedi socodkii si wada jir ah mushkiladii lagu
helayay. Mana aha arin aan waaqici ahayn haddii la fisho in micnaha iyo fahamka oo
la wadaagaa uu keenayo mushkilad xalin.
oBaadhitaanka dareenka hoose iyada oo su’aalo la isticmaalayo: “dareemadu
waxa weeye sababaha ka dambeeya qiimaynta aynu la soo boodno marka aynu
arin wax ka sheegayno” “taasi waxa ay ahayd fikrad fiican, ama mid xun, maxaa
yeelay …… ( dareenkii)” waxa aynu gaadhnaa go’aamo, talaabooyin ayaynu
qaadnaa had iyo jeer inaga oo cuskanayna xukun aynu gaadhnay oo ka soo
jeeda dareen aynu qabno. Hadaba fikradahaasi (dareemadaasi) waxa weeye
dhagaxda aynu dhiska ka bilowno, taasi oo isa soo biirsatay mudadii nolosheena
si noloshu qiimo inoogu samayso . hadaba marka aynu baadhno dhagaxdaa
aasaaska ah “iyada oo aynu su’aalo dabagal ah samynayno” waxa karti aynu u
yeelanaynaa in aynu hagaajino oo aynu wax ka badalno si loo gaadho xukun kii
ka duwan markaa go’aano iyo ficil la nimaadno. Si kale hadii loo dhigo,67DSHISKA Biriishyada
dareemada aynu qaadanaa waxa weeye waxyaalaha aynu isleenahay waa
garanaysaan ilaa aynu helayno caddayn sidaa ka duwan. Wadahadalkuna waxa
weeye qalab taya leh oo hadaba inoo suurta galinaya in aynu ogaano caddaymo
kale ( oo kuweenii ka duwan).
oI n a a d n o q o t o a s l i : si kale haddii loo yidhaa, sheeg waxa aad dareemayso
ama rumaysantahay una diyaar garow in aad sheegato .oDhimitaanka xawaaraha iyo in aanay hadalada dadka hadlayaa xidhiidhsanaan, si
micnaha hadaladoodu uu fikirkeena guud uugu duxo.oIn si qoto dheer loo dhagaysto waxa dadka kale iyo inakuba aynu leenahay:
inteena badan waa loo soo bandhigay fikradaha iyo xirfadaha dhagaysiga fiican.
Waxa iyana muhiim ah in mar kale xiligan la soo bandhigo.Waxa kale oo lagugu dhiiranayaa in aad dib u booqato doodii wadahadalka ee
cutubka 4 ee buuga Akhriyaha.Goobjoogaha Oo Wadahadalka Lagu Hagayo
Hawlaha soo socda waxa loo qorsheeyay inay kaa caawiyaan geedi socodka
wadahadalka lagaa codsaday in aad kormeerto oo aad fikradahaaga dhiibto marka la
dhamaystiro. Waa in aad si gaar ah u tilmaamtaa inta suurta gal ah dhaqanada aad
aragtay iyo wixii aad maqashay intii wadahadalku socday.
Ku qiimee weedhaha soo socda miisaan darajooyinkiisu yihiin 1 ilaa 5 marka la eego
tayada guud ee kooxda, xaga fulinta “qaaciidada” soo socota ee la xidhiidha
wadahadlkii ay (dhinacyadu ) lahaayeen .kow (1)= waxay u taagan tahay = wax
alaala iyo wax tayo ah oo ay leedahay majirto; sedex (3)= waxoogaa tayo ah ayaa
jirta, shan (5) = aad bay tayo u leedahay.1. Kartida xubnaha kooxdu ku joojiyaan in ay xukun gaadhaan.
Tayo la’aan12345Tayo badan2. Kartida ay u leeyihiin in ay wadaan geedi socodka mushkilad
baadhitaanka, halkii ay ka daba gali lahaayeen xalkii mushkilada
Tayo la’aan12345Tayo badan68DSHISKA Biriishyada3. Kartida ay u leeyihiin baadhitaanka dareemada hoose oo qayb ka ah
geedi socodka wadahadalka.
Tayo la’aan1 2345Tayo badan4. Kartida xubnuhu u leeyihiin inay ra’ayigooda uun ka hadlaan (oon cidi
raadayn), Tayo la’;aan12345Tayo badan5. Gaabinta xawaaraha wadahadalkooda iyo u hogaansanka waqtiga wax
Tayo la’aan12345Tayo badan6. In hadalka qofkiiba mar loo daynayo.
Tayo la’aan1 2345Tayo badan7. Muujinta kartida ay u leeyihiin in si xeel dheer ay u dhagaystaan waxa
dadka kale sheegayaan.
Tayo la’aan1 2345Tayo badan.8. Iyada oo wax laga korodhsado wax waydiinta iyo muujinta arimaha.
Tayo la’aan1 2345Tayo badanHaddii aad ku qiimaysay sifooyinkaa la sheegay ee wadahalka qaar ka mid ah
sadex (3) ama wax ka yar, ku qor meesha bannaan ee su’aasha ka hoosaysa
sababta aad darajadaa u siisay. Waa in aad xaaladaha si gaar ah u tilmaantaa
kugu dhaliyay in aad qiimayntaa gaadho.
Ka fikir qofka kooxda ka mid ahaa ee uugu tayada badnaa xaga isticmaalka mid
ama in ka badan oo sifooyinkaa qof ahaaneed ah si uu u hubiyo guulaysiga
wadahdalka. Waxa kuu banaan in aad xusto qof in ka badan adoo eegaya sidii
fiicnayd ee ay uuga qayb qaateen wadahalka.69DSHISKA BiriishyadaQALABKA 16:
QORSHAYNTA SIDII WAXA LA
LOO FULIN LAHAA
Ujeedadda xaaladaha waxbarashada intooda badani waxa weeye in lasiiyo ka
qaybgalayaasha fursad wax looga badalo oo hore loogu mariyo waxa ay shaqa ahaan
u qabtaan ama noloshooda gaar ahaaneedba u qabtaan. Markaa waxa ay u eegtahay
caqli gal in lagu gabagabeeyo in qiimaha khibrada waxbarashadu aanu si dhammays
ah u haboobayn ilaa ay ka qaybgalayaashu la yimaadaan awood daacad ah oo ay
khibrad ahaan si fiican u isticmaalaan wixii ay barteen.
Iyada oo taasi caqligal u muuqata, waxa jira hadanaa arimo badan oo soo galaya
fulinta aqoontii iyo xirfadii cusbayd. Waxyaalaha ku qalindaarayaa mararka qaar waa
qaar dibada ka imanaya, sida in kormeeraha ama saaxiibkaa uu iska indha tiro
awoodaada wax hagaajinta ama uu la yaabo tijaabada aad isku dayayso fulinta
fikrado cusub. Marar kalana waxa kaa hor imanaya gudaha ayay ka imanayaan.
Adigu waa aad niyad fiican tahay, hase yeeshee caadooyinkii hore ayaa xoog badan
leh. Waxana loo baahan yahay waqti badan, sabir iyo isku kalsooni si loola yimaad
dhaqano cusub ama xirfad cusub oo shaqada ku saabsan oo laga yaabo in aanu
qofku awoodaa u diyaar ahayn.
Habka u fiican ee jira ee lagu dhiiriyo gudbinta waxbarshadu waxa weeye qorshe la
sameysto. Waxa kordhaya inta laga yaabo in aad ka fuliso aqoontii iyo xirfadii hadii
aad sii yeelato fikrad hore oo kuu qorshaysan oo ku saabsan waxa aad baratay iyo
wax yaalaha kaa hor imanaya ee aad la kulmi doonto marka aad dib ula kulanto
dadkii aad shaqada wada lahaydeen (asxaabtii shaqada)
Qaado waqti waxoogaa ah imika si aad u buuxbuuxiso waraaq hawleedkan soo
socota, tan oo ah talaaba muhiim ah oo sidii aad uugu diyaarin lahayd naftaada
qorshe fulinta waxbarashadii ku saabsaneyd isku dhac maaraynta ah.1) Aniga oo cuskanaya wixii aan ka bartay iskudhac iyo khilaaf maaraynta
waxa halkan aan ku tilmaamayaa laba ama sadex arin oo gaar ah oo aan
qorshaynayo in aan ka qabto xaaladaha isku dhaca si aan wax fiican uga
…………………………………………………………………………………………………70DSHISKA Biriishyada2) Waxa aan jecelahay in dadka soo socdaa ay igu taageeraan dadaalkan,
waxana aan qorshaynayaa in aan u helo taageeradooda sida tan.
3) Hadii aan la kulmo caabi marka aan isticmaalayo aqoontayda iyo
xirfadahayga cusub ee iskudhac maaraynta, waxa aan qorshaynayaa in
aan u gudo galo siyaalaha soo socda.
…………71DSHISKA Biriishyada4)Kani waa qorshahaygii aan ku dhaqmayay si aan u qiimeeyo guulaysiga
istiraatijiyadaydii fulinta iskudhac maaraynta.…………………………………………………………………………………………………
……Waxa Af-Soomaaliga u Rogay / Tarjumay oo Tifatiray:
Mohamed Haji Mohamoud Hirsi
L/H Hargeisa Email & Multi-Service
Telephone (Mobile): 410187
Taariikh: 01-02-2005, 20-12-200472DSHISKA Biriishyada
3. Active Listening4. Alternative
5. Application6. Assessment
9. Basic Education
14. Civic15. Collaboration16. Committee
Xilkaa Saaran yah a y
Dhega ys i feejigan
Dhega ys i Darban
Dhega ys i Mug leh
Wax bedeli kara wax kale
Wac yi-ga lin
Wax-barasho Asaasi ah.
Dan ku Qabe
Ka faaâ&#x20AC;&#x2122;iida yste
Kobcin wax Qabad
La xiriira magaalo
Wada shaqa yn
Isgaadhsii ye7318. Community19. Community DevelopmentDSHISKA Biriishyada
- Jaali yad39. Effective leadership-40. Efficiency- Wax qabad fiican leh20. Concepts
21. Conceptual Hat Rack
29. Counter productive
38. EffectiveHorumarin Beeleed
Horumar in Jaali ya deed
Figrada Metalaada Xilaalka
Iska hor imaad
Ra yi la i sku raacay
Aqbalaad figrad guud
Xubin ka tirsan Gudiga degaanka
Lid ku ah
Cabirka w ax lagu salee yo
Qoddobbo wax lagu salee yo
Wax lagu Salee yo
Demoqra adi yad
Wax ku ool
Sidii la rabay wax u tarid
Hogaaminta wax ku oolka ah7441. Elected Leadership
42. Empower/Empowerment43. Enabler/Enable
47. Evaluation Survey
Feed back51. Financier
54. Good Governance
56. Group Discussion
58. Hand Book
64. Institution BuilderDSHISKA Biriishyada
- Hogaaminta la doortay
- Awood siin
- Awood u fasaxid-Awood siin
Qiima yn Sahan
Baaritaa n qiima yn eed
Masuul Maali yade ed.
Hab Xukun Wanaagsan
Tilmaan Bixi ye
Degsiimoo yinka A adanaha
Ha ya’ad Dhise7565. Institutionalise
66. InstructionDSHISKA Biriishyada
- Ha yaâ&#x20AC;&#x2122;dee ye
- Wax barasho
- Wax barid67. Key Point
69. Learning70. Learning Objective
71. Local Government/Authority
73. Management Process
79. Negotiation/Negotiator80. Networking
Participants-Qoddobbo Muhiim ah.
Qoddobbo Ma Dhaafaan ah
Geedi socod Hoggaamineed
Ujeeddoo yinka Ba rashada
Dawladda Hoose- Aqlabi ya d
- Inta Badan
- Geedi So codka Maara ynta
- Inta Yar
- Laga tiro yar yaha y
- Hadal Qor
- Hadal qoraal
- La socod
- La saan qaad
- Wada Xaajood siiye
- Wada Hadal sii ye
- Shabakade yn/Nida am hawlee d oo
- Dulmar/Guud Mar
- Ka-qa yb- gala yaash a/Kaqa ybqaata yaas ha7685.
Power Broker91. Presentation
102. Role play
104. Shared Vision
105. Simple Majority
110. Strategic Plan
116. Training Design
117. Training MaterialDSHISKA Biriishyada
- Waxqabad/Fulin Hawleed
- Ka eegid wajio kala duwan
- Qorshe Haw leed/Khidad/Si ya asad
- Si yaasad Deji ye
- Awood wax ku qabte/Awood
- Soo Bandhigid/Qadimaad
- Ka hor d haaf/Qors he Curi ye/ Qorshe
- Geedi socod/Socodka
- We ydiim o Qoran/we ydiimo ta xane
ah/w eydii mo Sahan ah
- Tirada ugu yar ee shirku ku ansixi
- Falcelin/Qorshe laawe/Arrin ku
- Tixraac/Raad raac
- Ila ys noq od/Humaag noqod
- Door-jelid/Door ciyaarid
- Aragti wadaag
- Aqlabi ya d hal dheeri ah
- Iska yeel id/U eke ys iin
- Buul caws/Carshaan/Isku raran
- Danee ya yaal
- Qorshe i staratiji ya deed
- Soo koobid/Khulaaso
- Astaamo/ Calaamado
- Haba ysa n/Nidaamsan
-Jaanjoo yadaTababarka/Naqshade ynta
Tababarka/Qiime ynt a
- Wax qaris laa’aan
- Qof aan w axba qarina ynin.
- Loo dhan yaha y/Gedigood
- Aragti fog/Aragti dheer
- Aqoon Isw eydaarsi
Priority two words
- Gorfe yn/ Falanqe yn /Taxliil128. Assignment
130. Benchmark- Shaqo Muca yin ah
- Male yn/ S i u qaadasho
- Bar qi ya aseed/Bartilmameed131. Challenges
133. Conceptual frame work- Caqabad/Loolan/Hardan
- Gadaan-fikradeed/Aasaas fik134.
Land Use Malaise
Xikmad soo jireen ah
Laba daran mid dooro
Kala duwanaan/Kala gedisnaan
Gacan ka ge ysi qo fnimo/In qof biiri
Maan-go dlin/Ra’ yi fiican helid
Isdhex-gal/isla fal-gal/Isku dhafmid
Aafada dhul boobka/Dhul ku habsa
Ujeeddo badan/Ujeedoo yin k ala du
Wax ka soo saarid78152.
Shrinking ResourcesDSHISKA Biriishyada
- Musharax dihin/Musharax iman kara
- Tababar horaad/Tababar hortiis
- Furdaami ye/Xali ye dhib
- Xirfad Hanasho/Aqoon sare u leh
- Qa yb ta Guud
- Adeeg guud
- Xeer Hoosaad
- Isqi yaasi d/Isqiime yn
- Kha yraa dka sii yar ana ya166. Technical
167. Training needs- Farsamo/Farsamayn
- Baahi tababarPriority three Words
168. Absolute Poverty- Saboolnimo169. Absolute
170. Application Commitments- Gebi-ahaan/Buuxda
- Nidar-gal/Daba-qaad ballan171. Bureaucracies- Biroqra adi yad/Xaf iis yad D awladda
shaqadoodu gaabis tahay
- Cufnaan/Jirmiga shega
- Hoos u dhac degaan/Hoos u dhac
- Ha is wareerin/Dadka badeecada
- Maldahnaan/Hadal aan dhab loo
laakiin laga fahmi karo wajiga qofka
- Ha ya’ad daha Gars oorka
- Baahida Sharci yee d
- Xeer Degin
- Sharci ahaan/Qaanuun ahaan
- Isku aadiye wax isku habboon172. Caution
174. Environmental Degradation
To Wear Different Hats195. Water Pollution
Institution BuilderDSHISKA Biriishyada
- Fasiraad xumo/Fasiraad qaldan
- Samo-filasho/Samo arag/Dhanka
Wanaagsan ka eeg
- Wadaag/Wada lahaansho
- Xumo arag/Xuma filasho/Dhanka xun
- Same yn celin/Dib u nacfi galin
- Xaalad taagan
- Xiiso galin/Fi-fircooni galin
- Xilqaad badnaan/Kaalimokala duwan
Bi yood/W asakhaw
Bi yood/ Dh iiq
- Masuul Maali yade ed
Si yaasad deji ye
Awood wax ku Qabte
Ha yaâ&#x20AC;&#x2122;ad dhise80All pages:124567891012131415161718192021222324252627282930313233343536373839404243444546474849505152545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283InfoSaveLikeShareDownloadMoreBuilding Bridges through Managing Conflict and Differences - Part 2 Published on Mar 20, 2007 Building Bridges through Managing Conflict and Differences - Part 2 (Somali)unhabitatFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore